Porn၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် Mojo - အာရုံကြောသိပ္ပံရှုထောင့် (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
Ex-porn အသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်နောက်ကျောကသူတို့ Mojo ရ။ အဘယ်ကြောင့်?
မကွာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦး ကောင်လေးကရှင်းပြခဲ့သည် သူ၏အပေါင်းအဘော်ကဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်:
2008 / 2009 ပတ်လည်ကလူသူတို့ကလိင်စဉ်အတွင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ကြောင်းထွက် freaked ခံခဲ့ရသောအင်တာနက်ပေါ်ရှိ surfacing စတင်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအချို့ကောင်းသောအဟောင်းများကိုအသေခံ-ချုပ်ကိုင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အကူအညီဖြင့်အစွန်းရောက် porn ၏ကွဲပြားဒီဂရီတစ်ခုအစိုင်အခဲစိုက်ထူရနိုင် ။ အဆိုပါလိုက်တယ်အရာကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏တခါတရံသူတို့ကအတူတူပင်အတိအကျလက္ခဏာတွေရှိခဲ့သညျကား, ထိုအဖိုရမ်ရေးသားချက်များမှတုန့်ပြန်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရပ်တန့်သူတို့ရဲ့ porn-သွေးဆောင် ED reverse ကူညီပေးခဲ့သည်။
စီးပွားပျက်ကပ်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ကွာသွားတိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, တိုးတက်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ပွညျ့စုံ၏ခံစားချက်နှင့်ကမ္ဘာ၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ခြင်း: ပုံမှန်လိင်စိတ်အပြင်, သူတို့ကတခြားအပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်.
ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချက်ကငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ဖို့မကြိုးစားခင်တစ်နှစ်လောက်ကစိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာ ၀ န်တွေနဲ့စိတ်ရောဂါပညာရှင်တွေကိုတောင်တွေ့ခဲ့ရပြီးစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသူကို ၀ န်ခံချင်ခဲ့တယ်။
ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးအမညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Streak (~ 80 ရက်) ရက်နေ့တွင်သွားသောအခါကျွန်မအခြားသူများကဖော်ပြခဲ့သည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိပွုမိတော့တာပဲ။ ယနေ့တစ် Streak ငါ၏ 109th နေ့၌ငါစသည်တို့ကိုမင်္ဂလာ, ယုံကြည်မှု, လူမှုရေး, မတ်, မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံနိုင်စွမ်း, စတာတွေခံစားရ
သူ့လိုယောက်ျားတွေအတွက်တော့ညစ်ညမ်းတာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာဟာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေပါတယ်။ ထိုသို့သောယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုလား၊ အသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများအဘယ်ကြောင့်ရှိကြောင်းကိုလည်းသူတို့တွေးမိသည်။ ဒီ post မှာတော့တိုးတက်မှုဘာကြောင့်ကွဲပြားသလဲ၊ ဘယ်သူ့အတွက်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်အောင်သုတေသနကိုလေ့လာမယ်။
ထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်းအဖြစ်လက္ခဏာတွေသော်လည်း, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ကျရောဂါသူတို့ကသိပ္ပံဆိုင်ရာစာပေအတွက်ဘုံတွေ့ရှိချက်မျှဝေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အားလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ ပြောင်းလဲ dopamine အချက်ပြ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuitry ၌တည်၏။ Dopamine သည်သွားဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဖြစ်သည်။ သူသည် libido၊ စွန့်စားရမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
တနည်းအားဖြင့် dopamine အချက်ပြတစ်ဦးကျဆင်းမှုသည်ဤသူအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည်:
လျော့နည်းသွားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ နှင့်တိုးမြှင့် စိုးရိမ်ခြင်း, ဆီသို့တစ်ဦးစိတ်သဘောထားနှင့်အတူပေါင်းစပ် အမျက်ထွက်လွန်တုံ့ပြန်, အရာမဆိုသွားလာခြင်းမှစိတ်အားထက်သန်လျော့နိုင်သည်,
လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း ကျန်းမာမျှော်လင့်ရာနိုင် စျြလြူရှုမှုဆီသို့ဦးတည်, အခြိနျဆှဲနှင့်ပင်တစ်အခန်းကဏ္ဍ စိတ်ကျရောဂါ.
သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအပြုသဘောကအားလုံးကိုဖော်ပြမှ: dopamine နှင့်ဆက်စပ် neurochemicals စနစ်တကျစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသောအခါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု, လူမှုရေး, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သာယာဝပြောရေး၏ခံစားချက်များကိုပိုပြီးအင်အားစိုက်ထုတ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ပုံမှန် dopamine အချက်ပြဖို့ပြန်လာသူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလွန်အကျွံစားသုံးမှုကနေ unhook အဖြစ်အများအပြားယောက်ျားတွေအတူတူပင်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြရှင်းပြကူညီပေးသည်သံသယ။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာများ မကြာခဏသပိတ်မှောက်နေကြပါတယ်။
အဖြေအချို့အသုံးပြုသူများအဖွင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာ, မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့် (အလွန်အကျွံသုတ်ရည်လွှတ်အနည်းငယ်ကနေပြန်လည်ထူထောင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည် လူသားမြားသညျအပျေါခက်ခဲ မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်အခြားသူများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောပိုမိုကြာရှည်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုရှိကြောင်းထုတ်ဖေါ် အလွန်အကျွံသုတ်ရည်လွှတ်။ သုတ်ရည်လွှတ်မှုအရေအတွက်သည်သတ်မှတ်ထားသောတံခါးခုံသို့ရောက်သောအခါ ဦး နှောက်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအကျိုးဆက်သည်ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးခုကိုဖော်ပြသည် - လိင်ဆိုင်ရာတားစီးမှု၊ လိင်၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည့်အကျိုးကျေးဇူးများဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကံျွသောက်ခြင်းအကြိမ်ကြိမ်ကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ပြီးနောက်လည်းလေ့လာတွေ့ရှိရသောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံခံစားမှု The သုတေသီများ surmise ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းမှကာကွယ်သည့်အတိုင်းအတာသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ၏“ hangover” သည်အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဟာသုတ်ရည်ထိထံမှ satiation မှရရှိလာတဲ့ရှည်တည်တံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးက၎င်း၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ဆွကျော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်ယန္တရားဖွဲ့စည်းကြောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိပြောင်းလဲမှုများလွန်းသုတ်ရည်လွှတ်ယာယီဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine အချက်ပြကိုအထူးပြုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဘေးဒဏ်သင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအများစု4ရက်အတွင်းမိမိတို့ကိုယ်ကို reverse ကသတင်းပို့သည်။ သူတို့ရဲ့ Mojo restore မှအပြည့်အဝတိရိစ္ဆာန်များ 15 ရက်ပေါင်းအထိလိုအပ်ပါတယ်။
ယခင်က၎င်းတို့၏ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ယန္တရားများ၎င်းအားနှင့်အမှတ်တမဲ့ dopamine အချက်ပြတစ်ဦးကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေအလျင်အမြန်ပြန်လည်နာလန်ထူသောသူယောက်ျားတွေရှိသနည်း
ဟုတ်ပါတယ်, dopamine သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်တစ်ခုတည်းသော neurochemical မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်များရှိ ပြီးသားတိုင်းတာ သည်အခြားလိင်မောကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲအဖြစ်ကောင်းစွာ:
အန်ဒရိုဂျင် receptor များလျှော့ချ,
ပိုမိုမြင့်မားသောအီစထိုဂျင် receptors နှင့်
အားလုံးလိင်စိတ်လြော့ဖို့အလားအလာရှိသည် သူတို့သည်လည်း dopamine တားစီးသောကွောငျ့.
ဤအရာ, အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်လျော့ချရေးဖြစ်ပါသည် ဦးနှောက် အန်ဒရိုဂျင် (testosterone ဟော်မုန်း) receptors ။ ပထမဦးဆုံးအသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်အတူအန်ဒရိုဂျင် receptor များစတင် တစ်တိုးတက်သောကျဆင်းယောက်ျားကြွက်လိင်သူတို့ကိုယ်သူတို့လောင်ကျွမ်းအဖြစ်အပိုဆောင်းဦးနှောက်ဒေသများလွှမ်းခြုံရသော။ ထဲမှာနည်းပါးလာအန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အတူ ဆုလာဘ်တိုက်နယ်နဲ့ hypothalamus, အထီးလျော့နည်းများမှာ တုံ့ပြန်တတ်သော testosterone ဟော်မုန်း-ပင်များ၏သက်ရောက်မှုမှသူတို့ကအများကြီးထွက် churning လျှင်။
အောက်ခြေလိုင်း: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးသူတခြို့ယောက်ျားတွေဖြစ်ကောင်းဤအပိုင်းကိုဆွေးနွေး neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုမျှမျှတတလျင်မြန်စွာသူတို့ကိုယ်သူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်နေကြသည်ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့တိုးလာလှုံ့ဆျောမှု, လူမှုရေးယုံကြည်မှု, တိုးတက်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပုံမှန်လိင်စိတ်ခံစားရသည်။
ဒီအကောင်လေးသူကရေးသားခဲ့သည်အခါ, ဥပမာ, သာအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏နေ့ 24 မှာ:
1) ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုငါ့အသက်ကိုအများစုအနေနဲ့အားလုံးအချိန်အနိမ့်ခဲ့သည်။ NOW က, ငါသည်ယခင်ကထက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုဖြစ်၏! ငါ၏အသှငျအပွငျ, ဆွဲဆောင်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်ယုံကြည်မှု။
၂။ ငါကဲ့သို့သောအမှိုက်သရိုက်ကဲ့သို့ထိ မိ၍ လဲမိသည်မဟုတ်။ - Uhh, uhhhmmm …။ mmmm .. ကောင်းပြီ… ah …ဒီတော့…နာမည်…မင်းနာမည်… (ဖုန်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမျက်လုံးချင်းမဆုံမိစေရန်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ )” ယခုတွင်ငါသည်မျက်လုံးများတွင်ပူပြင်းသောမိန်းကလေးငယ်များကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အပြင်ထွက်ပြီးဆွဲဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုံးကိုပေးသည်။
3) မိန်းကလေးများသည်အကျွန်ုပ်ကိုကိုသတိပွုမိနေကြသည်။ အများကြီးပို! ငါလမ်းထဲကငါ့လိဂ်၏ခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့သူအားကစားရုံမှာပူ, မထိုက်မတန်မိန်းကလေးများယခုငါ့ကိုပြူးကြည့်ပြုံးပြတယ်ပေးခြင်း, ငါနှင့်အတူပရောပနေကြသည်။
4) မပြုမီ, အစဉ်အမြဲငါသူတို့ပရောပခဲ့မှန်းဆခဲ့ကြတာပါ။ ယခုငါမျက်နှာမပျက်, ဆံပင်၏လိမ်, seductive pose, မျက်စိ-f-Ing ကအားလုံးသတိထားမိ !!
5) လူမှုစိုးရိမ်စိတ်တော်တော်များများသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦး, f-ing သူဌေးကဲ့သို့ခနျးသို့လမ်းလျှောက်ခြင်း, အရူးနဲ့တူယုံကြည်မှုပရောဂျက်။ မရှိတော့အလုပ်အင်တာဗျူးကိုကြောက်, တက္ကသိုလ်မှာအုပ်စုသည်အလုပ်၏မကြောက်။ MY ဝက်ခြံသွားပြီ! ငါကမယုံကြည်နိုင်!
၆) ဒီသီချင်းကိုငါကြားရပြီ၊ “ အိုဘုရားသခင်၊ မင်းဟာမင်းနဲ့မတူဘူး။ မင်းဟာ ___ စသည်တို့စသည်ဖြင့်အရမ်းကောင်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူး
ရုံဆွေးနွေးသုတ်ရည်လွှတ်-related အပြောင်းအလဲများကိုနှငျ့မတူဘဲ, စွဲ-related အပြောင်းအလဲများကပိုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပိုရှည်တည်တံ့ဖြစ်ကြသည်။ ပိုဆိုးသေး, တစ်ဦး လည်ချောင်းနာဆုတ်ခွာ မကြာခဏဆိုစွဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဟန်ချက်ညီဖို့ပြန်လာအကြားတည်ရှိသည်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုကြည့်ဘို့ကိုတွေ့မြင် porn, Pseudoscience နှင့်ΔFosB နှင့် မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး Porn Include.
ဒီတော့ဘယ်မှာ dopamine အတွက် fit သနည်း? ရှင်းပြအဖြစ် မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး Porn Include, စွဲ '' ဦး နှောက်အတွက်စံပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ် desensitization ။ dopamine အချက်ပြမှုကျဆင်းခြင်းပါဝင်သောစွဲလမ်းမှုသည်အပျော်အပါးများအားလုံး၏တုံ့ပြန်မှုအားယေဘူယျအားဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ဆေးစွဲနေသူကိုနေ့စဉ်အပျော်အပါးများနှင့်မထိတွေ့စေဘဲ dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများ၊ desensitization အတွက်ယန္တရားတော်တော်များများရှိသည် -
အခြေခံ dopamine တစ်ကျဆင်းမှု (လုပ်သူများ dopamine)
အလားအလာဆုလာဘ် (phasic dopamine) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖြန့်ချိလျော့နည်း dopamine
dopamine receptors တစ်ကျဆင်းမှု (ဖြစ်ကောင်း D2)
opioids နှင့် opioid receptors အတွက်တစ်ဦးကကျဆင်း
၌တွေ့သောဆုလာဘ် circuit ကိုမီးခိုးရောင်ကိစ္စ (ဆုံးရှုံး porn အသုံးပြုသူများအပေါ်မှာဤ 2014 လေ့လာမှု) ။ ဤသည်နည်းပါးလာအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုမှဦးဆောင်နှင့်အထက် 1-3)
porn စွဲအနိမ့် dopamine နဲ့နည်းပါးလာ dopamine receptors ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလားအလာမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကိုသတင်းပို့လက္ခဏာတွေများစွာသောအဘို့အကောင့်နိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အနိမ့် dopamine D2 receptors အခြေအနေများအတွက်တစ်အခန်းကဏ္ဍ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, ADHDနှင့် အကွောငျးရငျး.
တကယ်တော့တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုကျောင်းသားသတ္တိရှိရှိဆရာဝန်များကခွင့်ပြုသည့်အခါ မိမိအ dopamine ပျက်ဆီး ခေတ္တမျှ, ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်:
ဤကိစ္စတွင်အတွက်တိုးပွားလာ dopamine လျော့ကျစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများတဲ့အကွာအဝေးထင်ရှားဆက်တိုက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများ [, လှုံ့ဆျောမှု၏အရှုံးအာရုံခြီ, fluency လျော့နည်းသွား, နိမ့်စိတ်ဓါတ်များ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ဦးနှောက်မြူ, အညစ်, အရှကျကှဲခံစားချက်တွေကိုကြောက်ရွံ့] အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေတူ, obsessive-compulsive လက္ခဏာတွေ, မမှန်ထင်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ။
စွဲသုတေသီများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးစွဲ၏ဦးနှောက်အတွက် dopamine နဲ့ dopamine D2 receptors အတွက်ကျဆင်းမှုတိုင်းတာကြပါပြီ အင်တာနက်ကိုစွဲ။ D2 receptors ၌ဤကျဆင်းမှုနိုင် “ သဘာဝဆု” များနှင့်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက် ထိုကဲ့သို့သော junk အစားအစာ, မေလအဖြစ် အခြားအစွဲ-related အပြောင်းအလဲများကိုအရင်အဦးနေရာ။ သူတို့ D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် restore ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့ Mojo recover ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းနေသော users ဒါပြုစေခြင်းငှါ ရှေ့မှာ စွဲလမ်းအတွက်သတ်မှတ်။
အသုံးပြုသူရှည်လျားအလုံအလောက်ကအခွင့်အလမ်းပေးစေခြင်းငှါဖြတ်နိုင်ပါတယ်လူအများစုမှာတော့ဦးနှောက်ကိုသဘာဝကျကျဒီမယ်ဆိုရင် desensitization-ပျောက်စေတော်မူ၏။ ဒါကအတိအကျကဘာလဲ ဟောင်းတဦး porn အသုံးပြုသူများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ သူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းသို့မဟုတ်ကုသများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူလုပ်နေတာ။
စကားမစပ်, porn ကိုအသုံးပြုခြင်း ရှိပါတယ် ရုံထက်ပိုမိုပြောင်းလဲပစ်ရန် အခြေခံစွဲလမ်းကြောင်း (အချို့ ဦး နှောက်၌) ။ ဒါဟာညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏သတင်းများကိုမကြာခဏအစီရင်ခံလေ့ရှိသည် နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, သူတို့ recover အဖြစ်အရာကိုယ်နှိုက်ပြောင်းပြန်။ ဤသည်အခြားစွဲလမ်းနှင့်အတူမဖြစ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားကျယ်ပြန့်သက်ရောက်မှု Mojo ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်စွဲလမ်းမှုဟာညစ်ညမ်းမှုကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လို့ပါ ဦးနှောက်ကိုဆားကစ် ကြောင်းအပြုအမူပိုးပနျး / သာမန်အထီးမိတ်လိုက်အုပ်ချုပ်?
အလျင်အမြန်ပြန် bounce သူကိုအစောပိုင်းကဖော်ပြထားတဲ့ယောက်ျားတွေနှင့်အတူအမျှသဘာဝကျကျအချက်ပြသာမန် dopamine မှပြန်လာဟောင်းစွဲတိုးလာလှုံ့ဆျောမှု, လူမှုရေးယုံကြည်မှု, တိုးတက်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပုံမှန်လိင်စိတ်ခံစားရသည်။ အဲဒီမှာရယူခြင်းရုံအများကြီးပိုပြဌာန်းခွင့်နှင့်အချိန်ကြာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များထဲကအတော်များများ၏အောက်ဆုံးမှာအကောင့်အကြားတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီစာမျက်နှာ။ ဤတွင်နှစ်ဦးကိုအတိုချုပ်အစီရင်ခံနေသောခေါင်းစဉ်:
ငါအခုတိရစ္ဆာန်လိုခံစားရတယ် - ဟက်တာ! ညစ်ညမ်းတဲ့အတွက်ဘဝကိုမီးမရှို့တော့ပေမဲ့အခုပြန်လာပြီ။ ငါ ၁၀၄ ရက်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ ED မှာပြanနာမရှိဘူး။ ငါ့အရင်၊ အသက်ရှင်သောလူသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကဲ့သို့ငါပြု၏။
ပြီးတော့ရက်ပေါင်း ၂၃၀ မှာသတင်းပို့နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိတယ်။
ငါ porn ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒါကငါ့ရဲ့လိင်ကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ။ အဲဒါမရှိရင်ငါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ asexual ပါ။ လိင်မှုကိစ္စအသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာတကယ့်မိန်းမတွေရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဗဟိုပြုပြီး၊ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်၏အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆွဲဆောင်မှုသည်ယခင်ကတစ်ခါမျှမရောက်ဖူးသောအဆင့်များအထိမြင့်မားလာသည်။
1) ပိုလျှံသုတ်ရည်လွှတ်သိသိသာသာဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ် ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံး 15 ရက်ပေါင်းအပြည့်အဝ reverse အဖြစ်ယူနိုငျသညျ။ ဤသည်တိုတောင်းသောကာလအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြပါကကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
porn စွဲ-ဆက်စပ်ထံမှ 2) Recovery ကို ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ (ဆိုလိုသည်မှာ D2 receptors နှင့် dopamine အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားလည်ပတ်တိုကျရိုကျ cortex တိုးမြှင့) ကိုရှင်းပြကူညီနိုငျ နှစ်ခုလုံး တိုတိုနှင့်ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်။
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကလအနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုင်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနောက်မှာ၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမမြင်တဲ့လူအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည့်လက်ရှိအခြေအနေများနှင့်သူတို့ရုန်းကန်နေရဖွယ်ရှိသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာအချို့သောအခြေအနေများသည်မွေးရာပါဖြစ်ခြင်း (သို့) အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်းရှိသော်လည်း dopamine နှင့် dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။
မျောက်လေ့လာမှုများကြီးစိုးမျောက်ဝံများလကျအောကျခံမျောက်ဝံများထက်ပိုမိုမြင့်မား D2 အဆင့်ဆင့်ရှိသည်နှင့်ဤအဆင့်အရည်များမှာကြောင်းကိုပြသပါ။ စွဲဥပမာ, D2 အဆင့်ဆင့်စကားကိုမှမျောက်ဝံများကိုလျှော့ချ။ အောက်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါ:
လွှမ်းမိုးမျောက်ဝံများရှိ ပိုမိုမြင့်မားသော dopamine (D2) receptors လကျအောကျခံမျောက်ဝံများထက်, ဒါပေမယ့်မရ မှီတိုငျအောငျ အဆင့်ဆင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်မျောက်များသည် D2 receptor level အပေါ် အခြေခံ၍ လွှမ်းမိုးသွားမည်ကိုကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ဤသည်ကတပ်သားခေါင်းဆောင်များပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါမျိုးတွင်အမျိုးသားသစ်များပေါ်ပေါက်လာစေသည်။ သူကပလ္လင်ကိုလက်ခံသည့်အခါတစ် ဦး လေ့လာသူရဲ့အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်။ D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆပင်မဟုတ်, အခြေအနေများမှတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်။
အဆင့်ဆင့်စတင်သောအခါ၎င်းသည်လက်အောက်ခံမျောက်များမဟုတ်ပါ အနိမ့် D2s, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်သောကြီးစိုးမျောက်ဝံများ ခုန် dopamine receptors ၌တည်၏။ အကျိုးသက်ရောက်မှု, သူတို့သည် dopamine ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံကြီးထွားခြင်းနှင့်အရှင်ကြီးစိုးအထီးဖြစ်ခြင်းအတွက်အကျိုးခံစားနေကြသည်။ လူသားမြားသညျတှငျ, လွန်း, သုတေသီများလေ့လာတွေ့ရှိ အကြောင်း,
လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် dopamine D2 / D3 receptors တွေရဲ့သိပ်သည်းဆဆက်နွယ်နေကြောင်းလူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဟောင်း porn အသုံးပြုသူများအပယ်သွားသူတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သွားလာခြင်း, သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုထောက်ခံမှုကူညီရန်နှင့်၎င်းတို့၏ D2 အဲဒီ receptor ရေတွက်တိုးမြှင့်အဖြစ်, ထိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် နှင့် သူတို့ကိုကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်များကိုပေး? dopamine receptors မြင့်တက်အဖြစ်သို့မဟုတ်လူမှုရေးစွန့်စားမှုယူဖို့စိတ်အားထက်သန်ရုံသဘာဝကျကျတိုးမြှင့်ပါသလဲ?
ထိုစိတ်မကောင်းစရာ "beta ကို" ခံစားချက်များကိုကော? ထည့်ပြီးစဥ်းစားပါက စွဲလမ်းမှုကိုကျဆင်းစေ dopamine D2 receptor များတွင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်သုံးစွဲသူများကိုပုံမှန်ထက်“ သူရဲ” နည်းသည်ဟုခံစားစေနိုင်သလား။ မျောက်များတွင်ကာလရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုသည်စမ်းသပ်မှုအားလုံးသို့ယူဆောင်လာသည် အလားတူ D2 အဆင့်ဆင့် နှင့်အဆင့်အတန်းကွဲပြားမှုထွက်သုတ်။ အမှန်စင်စစ် D2 receptors ပြီးနောက် ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး D2 receptors ၏အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူမပတျသကျဘူး ကြိုတင် ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်။ ဒါက overconsumption အပေါငျးတို့သမျောက်အညီအမျှ-ပင်ကြီးစိုးသူတွေကိုပျက်ကျခဲ့သည်။
D2 receptors စွဲဆန့်ကျင်အကာအကွယ်များမှာ။ လူမှုရေးအုပ်စုကြီးစိုးအထီးမျောက်ပိုမိုမြင့်မား D2s ရှိသည်နှင့်ကင်းပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်မှလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော D2s ၏အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုလူ့လေ့လာမှုများအတွက်ကော်ပီပွားယူပြီ။ ကျနော်တို့တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထပ်မံ D2 ကျဆင်းမှုများကနောက်တော်သို့လိုက်လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုအနိမ့် D2s တစ်သံသရာမှဦးဆောင်သောဖြစ်နိုင်ခြေထွက်မအုပ်စိုးနိုင်ပါသလား?
အားလုံးကတော့မျောက် သက်ရောက်မှုကနေ recover တူညီတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားထဲမှာစွဲ၏။3လအတွင်းပြီးနောက်, စွဲမျောက်များ၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့ပုံမှန် D2 အဆင့်ဆင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ သို့သော် 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုမပေးခဲ့ရသည်။ ဤသည်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ variable ကိုမှုနှုန်းကိုရှင်းပြကူညီခြင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းငှါ
မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မှာ, Mojo ပုံမှန် dopamine အချက်ပြအပေါ်သို့အတန်ငယ်မှီခိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အဘယ်အရာကို testosterone ဟော်မုန်းကော?
အများစုကယောက်ျားတွေယုတ္တိနည်းအသှေးကို testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့တွေ့ကြုံခံစားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်ယူဆ။ မဟုတ်ပါဘူး။ အသွေးသည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုသိသိသာသာသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် abstinence ကြောင့်ထိခိုက်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦး မှလွဲ. တကယ်တော့ တနေ့ဆူး, abstinence မသက်ရောက်ရှိပါတယ် အသွေးတော် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်။ ကျနော်တို့အရေးကြီးဆုံးသဲလွန်စဦးနှောက်၌အိပ်ထင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိုက်ထူခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဆက်စပ် Mojo-ခံစားချက်တွေကိုအများဖြစ်ကြ၏ အမှန်တကယ် dopamine-မှီခို။ testosterone is သက်ဆိုင်ရာပြုလုပ်ထားတဲ့အလှည့်အတွက်မဟာဗျူဟာကျကျဦးနှောက်ထဲမှာအန်ဒရိုဂျင် receptor များတည်ရှိဖို့ချည်နှောင်သောကွောငျ့ dopamine မြှင့် သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် dopamine receptors ကိုသက်ဝင်။ သို့သော်အန်ဒရိုဂျင်ပါလျှင် or dopamine receptors ငြင်းဆိုခဲ့သည် ... mojo နိမ့်နိုင်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကြွက်များတွင် androgen receptors သည်ယာယီကျဆင်းသွားသည် အသီးအသီးသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အတူနှင့် recover လုပ်ဖို့ရက်ပေါင်းယူပါ။ အလားတူတစ်ခုခုကောင်းစွာလူသားများတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုများဖြစ်နိုင်သည် အသံတိတ်ထားသောလိမ့်မည် receptors အခြေခံမှပြန်လာမှီတိုင်အောင်။ Mojo ၏ကွင်းဆက်များသည် androgen receptors နှင့်စတင်ပြီး dopamine receptors ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဟော်မုန်းတွေဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့) ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကြောင့်လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ စင်စစ်, ဦး နှောက်ရဲ့ dopamine စနစ်ကဖြစ်ပါတယ် အဆောက်အဦများနှင့်အတူရောယှက် အဆိုပါ endocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်များကိုထိန်းချုပ် (hypothalamus, amygdala) ။
တိုတောင်းသောများတွင်ပုံရှုပ်ထွေးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ dopamine receptors နှင့် dopamine (စွဲ) အနိမ့်များမှာ, ဒါမှမဟုတ်ဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များ (သုတ်ရည်လွှတ်) ငြင်းဆိုခဲ့သည်ကြလျှင်, ကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သ testosterone ဟော်မုန်းမပြုစေခြင်းငှါလျှင် သငျသညျမသွားရ။
ရလဒ်များအရအကျိုးခံစားခွင့်အများစုသည်ခဏတာအချိန်ယူရပြီး၊ အထူးသဖြင့်ဆေးစွဲသူများအတွက်တည်ငြိမ်ရန်ပိုကြာသောကြောင့်၊ အဆိုပါ receptor-level အယူအဆသို့သော်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်နှင့်စွဲအပေါ်လက်ရှိသုတေသနနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူသေသပ်စွာ align ။ တိကျသောစက်ရုပ်များမည်သို့ပင်ရှိနေစေကာမူအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်သူများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ငါအချို့ကြောက်မက်ဘွယ်အကြိုးခံစားခှငျ့ခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ပထမ ဦး စွာပယ်, ငါနောက်ဆုံးတော့နောက်တဖန်စွမ်းအင်ရှိသည်! ငါအထက်တန်းကျောင်းကတည်းကဒီကောင်းသောအရာမခံစားရဘူး။ ဒါဟာငါ Hulk မဟုတ်သလိုဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့အပိုစွမ်းအင်ရှိသည်။ ကျွန်တော်အသက် ၂၀ ကျော်အစောပိုင်းအများစုကိုစွမ်းအင်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ အခုတော့ငါ [တစ်ကိုယ်ရေညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း] ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ရပ်တန့်လိုက်ပြီဆိုရင်၊ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ လူမှုရေးပိုလုပ်ခြင်း၊
ဒုတိယအချက် - ငါဟာအမျိုးသမီးအားလုံးကိုတကယ်တူးနေတယ် နေရာတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။ အတော်များများကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါ [porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း] ကိုအစဉ်မပြတ်ပြုလုပ်စဉ်ငါခေါင်းကိုအမျိုးသမီးများအားဝေဖန်ခဲ့သည်။ လိုပဲသူတို့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြဘူး။ အခုငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငါ့ကိုငါဆွဲဆောင်တဲ့သူကိုပြောပြရုံသာမကအချို့ကငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။ တနည်းကား, ငါမှော်ကြီးမားတဲ့ကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကောင်းသောအရာသည် ၀ င်ရောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ထိုအခါငါအများကြီးပိုသတ္တိရှိသည်။ ငါထင်တာကကြောက်ရွံ့မှုကဘာလဲ၊ ကြောက်ရွံ့မှုများစွာသည်မပြောင်းလဲသေးပါ။ သို့သော်ဆန္ဒသည်နောက်ဆုံးတွင်ဟန်ချက်ညီနေပြီးအရေးယူခြင်းဆီသို့ ဦး တည်နေသည်။ ထိုကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားမှုပါပဲ။
တတိယ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့နောက်ဆုံးတော့ငါ့ဘဝအတူတူရှိနေပြီ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကအားဖြည့်ပေးတယ်၊ ငါပိုကြီးပြီးပိုကြီးစဉ်းစားတယ်!
ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 41 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။ porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 21 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
အရွယ်ရောက်သူနျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးပွားလာ dopamine D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်လှုံ့ဆျောမှု (2013) တိုးမြှင့်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အံ့ဖွယ် Rethinking - တစ်ကိုယ်တော်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ လူကြိုက်များသောဒဏ္fiveာရီငါးခုကိုပြန်လည်စဉ်းစားပါ
တစ် ဦး ကစိတ်ပျက်စရာလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသောယောက်ျားများသည်၎င်းတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ရရှိရန်မကြာခဏလိုအပ်သည်။ Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုporn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် (2012)"
admin ရဲ့ says:
12 မှာ 12 / 2012 / 6: 36 ညနေ
ဒါကြောင့်လနဲ့စတင်ပြီးပြန်ပေါ်လာတာနဲ့လတွေကြာပြီးနောက်မှာ .. အကျိုးကျေးဇူးများဟာကြီးမားလွန်းခြင်းမရှိသဖြင့်သေးငယ်သောမျဉ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကျွန်ုပ်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ကျင့်သုံးမှုသည်ငါ့ကိုလုံးဝကြောက်လန့်စရာမဖြစ်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ .. ဒီနေ့ငါသဘောပေါက်နားလည်မှုအသစ်တစ်ခုရလာပြီ။
ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြထားသလို .. အစပိုင်းမှာငါကလူပဲလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်ငါပြန်လာခဲ့တယ် .. ပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့စတင်ခြင်းနဲ့ပြန်ထွက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ ၄-၅ ရက် ၀ န်းကျင်ရောက်တော့လူထက်ပိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်မတွေ့တော့ဘူး၊ နောက်တဖန်ပြန်ဖြစ်သွားတော့မယ် ..။ နောက်တစ်ခါပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီးနောက်စိတ်ပျက်အားငယ်စရာကောင်းတဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်မရှိတော့ဘူး .. ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စစဉ်းစားလာတယ်။ အရာရာဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာထနိုင်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / ညစ်ညူးခြင်းသည်ငါထင်သကဲ့သို့မဆိုးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ရုံမျှသာဖြစ်သောကြောင့်
ငါမှားသွားတယ်။ ဒီဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာမဟုတ်ပါ ယခုငါ ၅ နေ့ရောက်လာပြီ၊ ငါ၏ alpha ဝိသေသလက္ခဏာများသည် CRAZY ကဲ့သို့နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ မျက်လုံးချင်းဆုံမိတယ်၊ ငါပြောနေတာပိုများနေတယ်၊ ​​ကြက်တွေများငါ့ကိုစစ်ဆေးနေတယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်ပိုပြီးလွှမ်းမိုး / ပုလ်စေသည်။ ငါနောက်ဆုံး nofap နှင့်အတူဘုတ်အဖွဲ့ကိုသွားနောက်ဆုံးသောစုံတွဲသည်ငါ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး / လုပ်ရပ်တွေကိုမှလုံလောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးဆောင်မခံခဲ့ရပုံပါဘဲ။
ဒီနည်းကိုလုပ်, အိုင်တီကပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အစပြုပြီးပြန်လည်ပြန်ဖြစ်ပါကသင့် ဦး နှောက်သည်ထိုပုံစံနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်၊ ထို့ကြောင့်ပထမအပတ်တွင်လူအများပြုလုပ်ခဲ့သည့်နည်းတူလူအများစုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်သတိမပြုမိတော့ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ ထွက်သွားပါ။ dopamine receptors ကြီးထွားလာသည်။
ငါအချို့အသေးစားအလင်းတန်းများဖြာတစ်ခုသို့မဟုတ် relapse ပြီးနောက်ငါ၏အစွဲကဦးနှောက်ကဒီမြေတပြင်လုံးပြန်လည်နာလန်ထူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိုက်မဲခဲ့ပုံကိုငါ့ကိုပြောပြရန်စတင်လိမ့်မည်ဟုငါပဲပြန် PMO ကိုသွားသင့်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါအခုငါ့အဦးနှောက်ကိုနားထောင်ဖို့မသည်ငါ့ကအရမ်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
ပထမဦးဆုံးဒီနာလန်ထူစတင်သောအခါအကြှနျုပျသအကြီးအကျယ်လူမှုရေးနဲ့ငါ့အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲမျက်လုံးချင်း, ကိုယ်ဟန်အနေအထား, မိန်းကလေးများစကားပြော (ငါကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကတည်းကပရောဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ကိုယ့်စကားပြောဆိုနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်), စသည်တို့သတိထားမိဖို့စတင်ခဲ့ပြန်လကြာ ။ ငါကပိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုပိုကောင်းသလိုခံစားရတယ်။
မကြာသေးမီကပြန်ဖြစ်လာပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးမှုများကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အချို့သောအမှားအယွင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်ထွက်ခွာခဲ့ရသည်ကိုမှတ်မိပြီး၊ ကျွန်ုပ်အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ သူစိမ်းများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောခဲ့သည်၊ စကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဖော်ရွေမှုနှင့်လူမှုရေးလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ, ငါ့စွဲ ဦး နှောက်ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း PMO ကိုအသုံးပြု။ ငါပင်ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိနိုငျကွောငျးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ငါကကင်လုပ်ခိုင်းကိုနားမထောင်ကြဘူး ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်မှာပင်ဒီပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ဆေးကြောရုံသက်သက်သာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။ ငါဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုငါသင်ယူပြီးပြီ။ ရံဖန်ရံခါချော်ပြီးသည့်တိုင်ပင်ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့်ကိုမလွယ်ကူပါ၊
12 မှာ 12 / 2012 / 9: 47 ညနေ
မှန်ပါတယ်၊ nofap ကသာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်၊
30 Days Report - ဘဝဟာဆက်ရှိနေတယ်။
ငါတရားဝင် 1 လရောက်ရှိပါပြီ (ကျွန်ုပ်သည်အမှတ်အသားမရှိပါ) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးပူပန်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌အဆုံးမဲ့ 'whatss' ကိုရှာဖွေနေသည့် 'ဆေးတစ်လက်' ဖြစ်သည်ဟုပြောရပါမည်။ မှန်ပါတယ်၊ nofap ကသာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်၊
လူတွေဟာငါ့ကိုဘေးဥပဒ်လိုပဲရှောင်နိုင်တော့မယ်။ ငါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့ကြိုတင်ဤမျှလောက်မစဉ်းစားပါနဲ့ကျွန်မပိုပြီးရဲရင့်ခြင်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော့်အတွက် 'သိပ်မစဉ်းစားတတ်ဘူး' ဆိုတာ nofap ကကျွန်တော့်ကိုအောင်မြင်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာပါ။ တစ်ခါတုန်းကငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုအလေးအနက်ထားရမယ်။
သင်တို့တွင်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်အလွန်အကျွံစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးနောက်ဆုံး၌အရာရာကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သေချာသည်။ 90 ရက်အတွင်း ONWARD!
12 မှာ 18 / 2012 / 10: 51 ညနေ
လအနည်းငယ်အကြာကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ adderall သွားလေ၏။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်ုပ်၏ကုထုံးကိုကျွန်ုပ်ပြောပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကပထမဆုံးအကြိမ် adderall ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂ လကြာ nofap ပြီးတဲ့အခါမှာ၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝမလိုအပ်တော့ပါ။ 🙂
သင်ကအရမ်းသငျ့, Nofap / TEDx Talk ကိုအကွောငျးအကြှနျုပျဆရာဝန်ကိုပြောပါတယ်!
12 မှာ 19 / 2012 / 5: 03 ညနေ
14 ရက်ပေါင်းများမှာပြီးနောက်ကောင်းသောအရာမျှမ fapping အပေါ်များမှာ
Ninja2013 ဒီဇင်ဘာ 18, 2012
14 ရက်ပေါင်းများမှာပြီးနောက်ဆနျ့ကငျြဘတွင်ကောင်းသောအရာမျှမ fapping အပေါ်များမှာ
- ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌အပူရှိန်ခံစားပါ၊ ၎င်းသည်ရှင်သန်နေသည်။ ရှည်လျားသောအချိန်ပြီးနောက် 100% စိုက်ထူပြီးနောက်နံနက်အစိုင်အခဲစိုက်ထူ။
အသားအရေနဲ့ဆံပင်၏ -Great သေံ။
- ငါနုပျိုသည်၊ မိန်းကလေးများကငါ့ကိုမင်္ဂလာပါ၊ မျက်လုံးများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။
အားကစားခန်းမမှာမိုးသည်းထန်စွာ -Lifting, ငါသည်ကြီးမားသောယောက်ျားတွေယခုရှက်ကြောက်သောကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းပေးရန်။
- တစ် Halo အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရသည်
- နံနက်စောစောထမနက် ၄ နာရီ ၀ န်းကျင်တွင်အိပ်မောကျပြီးအိပ်ယာမ ၀ င်ပါ။
12 မှာ 23 / 2012 / 10: 49 ညနေ
အတက်အကျအပိုင်း2နှစ်
ရယ်စရာကောင်းတာကငါဟာအပြုအမူဟောင်းမပါဘဲလတစ်လဒါမှမဟုတ်ရက် ၉၀ ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်တောင်တောင်မလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ငါခံစားခဲ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကငါ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲအများဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်တယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှု - ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီး ၂ ရက်လောက်အကြာမှာ၊ ငါ့အာရုံကပိုရှင်းလာပြီးစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲမထဲမ ၀ င်ဖို့ပိုလွယ်ကူသွားတယ်။ စကားစမြည်ပြောတဲ့အခါလူတွေပြောတာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်တယ်။ အခုတော့ဝါသနာထက်ပိုပြီးဖတ်ရတော့မယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်၊ လေ့လာမှု၊ ဆက်ဆံရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနှင့်ကူညီသည်။
ယုံကြည်မှု - ဒါကကျွန်တော့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအကျိုးကျေးဇူးပဲ။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ငါ့ရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကဆင်းရဲနေလို့ပါ။ လမ်းပေါ်ရှိကျပန်းအမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်ယခုလိမ္မာပါးနပ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်သည်။ ဒါကိုရှုထောင့်သို့ထည့်ရအောင်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလမှာလှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို“ ကုန်တိုက်” ကနေလမ်းညွှန်တွေရှာဖို့ငါအချိန်အများကြီးယူပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုချဉ်းကပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အခုတော့ရယ်စရာကောင်းတဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတစ်ခုကကျွန်မရဲ့နှလုံးခုန်မှုကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၀ ရက်တောင်ငါပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားစမြည်စပြောနေတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိရမိတယ် ဒါကငါ့အကြိုက်ဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယုတ်ညံ့ - အဘယ်သူမျှမကောင်လေးသည်အခြားယောက်ျားတွေယုတ်ညံ့ခံစားရရန် likes နဲ့ကျွန်မတစ်ဦး relapse ပြီးနောက်ပြန်လာညံ့လို့ငါ့ခံစားချက်တွေကိုအားဖြင့်ပိုပြီးဒီအကျိုးကျေးဇူးသတိပြုမိသည်။ ဒါကအများကြီးရှင်းပြချက်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်လည်းရှင်းပြဖို့ခက်ပါတယ်။ တစ်ချုံးပြီးနောက်ကျွန်မပိုပြီးငတ်မွတ်သောသူတို့ကို, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အထိခိုက်မခံစတာတွေခံစားရနှင့် abstinence ၏တစ်ပါတ်ပြီးနောက်ပြောင်းပြန်ခံစားမိစတင် ... .like ယောက်ျားသည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဆိုးကျိုးများလျော့နည်း quantifiable သျောလညျးသငျစိတျသောအရာတို့ကိုရိပ် မိ. သောအော်တိုနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်သတိထားမိ။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါသင်ရထားပေါ်တွင်ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်ထိုင်လျက်နေနှင့်ကောင်လေး၏ alpha အထီးအမျိုးအစားတစ်ဦးကိုနောက်ကိုသင်ထိုင်ပေါ်လာပါတယ်။ ယုတ်ညံ့ခံစားချက်တွေကိုသိသိသာသာလျော့နည်းဖြစ်ကြပြီးငါလျော့နည်းကြောက်ခံစားရချင်ပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒပိုမိုတိုးလာခြင်း - ကျွန်ုပ်သည် oksytocin မှညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောပုံသို့မလာခြင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ဘာကိုခန့်မှန်းလိုသောဆန္ဒကိုစတင်လိုသနည်း။ သင်လူများနှင့်စကားပြောလိုသောအခါသူတို့အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည် (yeh, go figure) ။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ် txt ရရှိသောအကြိမ်အရေအတွက်သည်ကျွန်ုပ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်၏ fapping နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်။ ငါအရက်သောက်တဲ့အခါကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး။ ရယ်စရာကောင်းသည်မှာ PMO နှင့်ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှဂရုမစိုက်လိုသောတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထီးကျန်နေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ အလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်မိသားစုညစာစားပွဲမှာထိုင်ပြီးလူတွေကိုအထီးကျန်ဆန်လွန်းလို့အခန်းထဲမှာငိုနေတုန်းပဲ။ abstinence စဉ်အတွင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ပျက်; ငါပိုပြီးဆက်သွယ်ချင်ပေမဲ့အထီးကျန်တယ်လို့မခံစားရဘူး။ ဤသည်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့သည်အလွန်လှပခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းထဲကနေအလွန်သိသာသည်။
12 မှာ 30 / 2012 / 2: 23 နံနက်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ porn နဲ့မကင်းဘဲအလွယ်တကူ fap လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လုံးဝ fap မလုပ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးရလာတယ်။
01 မှာ 04 / 2013 / 3: 20 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည် avid အပြေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်လျှင် ၅ ကြိမ်ပြေးလေ့ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည်။ ငါအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုအစဉ်မပြတ်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်။ ငါအများကြီးတိုးတက်အောင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ငါမနေ့ကပြန်သွားသည်အထိ5ရက်ငါသွားလေ၏။ ငါ ၄ ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ / (ဒီကြီးမားတဲ့ပျက်ပြယ်မှုကိုငါဖြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်) ။ ငါမရိုက်သော်လည်းငါစက်တစ်လုံးလိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကောင်းလိုက်တာ ငါတကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းနိုင်ဘူး။
ပထမ ၁၀၀ မီတာ - ငါအရမ်းနှေးတယ်။ 100m ပြီးနောက်: သန့်ရှင်းသော shit ငါပြီးသားပင်ပန်း။
ကိုယ့်ဒါ lethargic ခံစားခဲ့ရနှင့်မျှမလှုံ့ဆျောမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအလုံအလောက်ကိုစား, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှခဲ့ဘူးစဉ်းစားခဲ့သလဲ ငါပင်ပန်းလား ပြေးနေတုန်းမိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, ငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ မနေ့ကငါ fapped ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ yeah, အကျယ်အကြှနျုပျ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက် fapping ။ ကိုယ့်ကဒီဝေမျှချင်တယ်။
01 မှာ 05 / 2013 / 6: 08 ညနေ
nofap ရှင်းလင်းချက် (ငါ၏အရှုထောင့်) ကနေရရှိခဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
တစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်မကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုမည်သို့ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ငါ၌ရှိသကဲ့သို့စွမ်းအင်ပိုရှိသည်မဟုတျဘဲငါကကဖိန်းဓာတ်တစ်တန်ကိုသောက်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုကာကိုလာ ၂ လိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပျင်းရိသောအခါဘယ်လောက်အထိပျံ့နှံ့သွားပြီးအမှန်တကယ်၎င်းကိုဆန့်ကျင်။ မည်သည့်အချိန်၌လိုလိုလားလားဆန္ဒရှိကြောင်းသတိပြုမိရန်ကူညီသည်။
fap အချိန်တုန်းကစွမ်းအင်မရှိတာကိုသတိပြုမိပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကျပြီး“ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “ fuck ဆိုတဲ့ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး” အချိန်လေးနည်းနည်းလေးများများရှိလာသည်။ ထို့အပြင်အချိန်နှင့်တပြေးညီ“ fuck ဆိုတဲ့ငါအတူတကွစုစည်းဖို့လိုရုံသာမကအမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရန်အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိ” သည်။
01 မှာ 11 / 2013 / 2: 11 နံနက်
by fapboogie61 ရက်ပတ်လုံး
(NoFap နေ့ 62, pornfree နေ့ 98) ငါအိမ်မှုဝေယျာလုပ်နေတာပေါ့ငါကဒီအတိတ်ရက်သတ္တပတ်ကသူတို့ကိုလုပ်ဖို့ထိုသို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောသတိပြုမိသည်။ ငါက တကယ်တော့ ဒီပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်။ ဒါဟာငါ့အဦးနှောက်တကယ်ငါ့ကိုထွက်ကူညီပေးနေလျှင်အဖြစ်ကောင်းတစ်လမ်းအတွက်အလိုအလျောက်ခံစားရ၏။ အမှုတို့ကိုပြုရနိုင်စွမ်းလမ်းဖွင့်, ကျိန်းသေနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါကဲ့သို့သောနာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေချိုးဖောက်မှုများအတွက်အချို့အဆင့်တွင်ရှိဦးနှောက်ထဲမှာဇီဝဗေဒပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးငါ neurotransmitters ရေချိန်ပြန်လည်ညှိရန်အဘို့အရှည်လျားအလုံအလောက်ထွက်ကျင်းပပြီခံစားရတယ်။ အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘအလွန်သိသာသည်။ ငါတောင်မှအိမ်တော်ထဲကရဖို့မလိုချင်ခဲ့ဘူးခြင်းမပြုမီ။ ကျွန်မအိပ်ရာထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲယူဖို့ကအနီးမဖြစ်နိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မနေ့စဉ်အလှည့်မှာအကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်ကိုတိုက်ခဲ့ကြောင်းပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ အခုတော့ငါကဒုတိယအတွေးမပါဘဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသင်တန်းရှိပါသည်။ သငျသညျအသက်အရွယ်အတွက်အရက်မူးသောက်သုံးရေမရသူကဒီကောင်လေးခဲ့ကြသည်လျှင်မူကား, သန့်ရှင်းသောရေအစွမ်းသတ္တိကောင်းစွာသင်ဖို့ရှန်ပိန်များကဲ့သို့မြည်းစမ်းခဲ့သညျ။
အမှုအရာလွှဲသို့မဟုတ်ယခုဆိုးဆိုးရွားရွား stagnate, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုပြီးရက်ပေါင်းစေခြင်းငှါ, အနည်းငယ်ပိုပြီးရက်သတ္တပတ်များနှင့်အမှုအရာသည်နောက်တဖန်တက်ကြည့်ဖို့စတင်ရန်မည်။ ညီအစ်ကိုတွေကအပေါ်ကိုင်ဆောင်ထားပါ။
01 မှာ 12 / 2013 / 5: 55 ညနေ
အဘယ်သူမျှမ FAP ငါ့ကိုစူပါစွမ်းအင်တယ်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ post ကိုကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ဘူး။
ငါချက်ချင်းထင်, ငါ့ကိုအဘို့အ sign up ကို! ငါအရင်သီတင်းနှစ်ပတ်ကသွားခဲ့ပြီ၊ (နေရာတိုင်းမှာလွင့်ပျံချင်လို့မှလွဲရင်) တကယ်ထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုတကယ်သတိမပြုမိဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဘာကြောင့်ကွဲပြားသွားမှာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ဒီတော့အဲဒီညမှာဒီကောင်လေးပြောတာကိုငါစစမ်းတယ်။
ကျွန်မစတုတ္ထနေ့အဘယ်သူမျှမ FAP ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ငါကြိုးစားကြည့်နှင့်တင်းမာမှုကိုပယ်ရှားဖို့ Craigslist အပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့် bot တွေဟာရှာဖွေတာတက်အဆုံးသတ်ပေမယ့်စိတ်လှုပ်ရှားငါတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုကျေနပ်မှုကိုဖန်ဆင်းရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်း။ အမဲလိုက်ခြင်း။
ယခုငါပဉ္စမနှင့်ခြောက်ရက်မြောက်သောနေ့၌ငါအမှုအရာသတိထားမိစတင်သောအခါ။ ငါ (ငါသီတင်းနှစ်ပတ်ကသွားသောအချိန်ကမဟုတ်) နေ့စဉ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်မိဘူးဆိုတာသတိထားမိတယ်။ (ပိုကောင်းတဲ့အစာကိုစားရင်းရေပိုသောက်နေတုန်းပဲ) ငါမှာစွမ်းအင်တန်ချိန်ရှိတယ်။ ငါအခုဆင်း shit ရ။ ငါအဲဒီလိုခံစားနေရတာကိုမခံစားရဘူး၊
ဒီအပြောင်းအလဲတွေဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ သုံးရက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ငါသူတို့ကိုမသွားစေချင်ဘူး။ ငါလုပ်နေတာတွေအတွက်အားပေးချင်တာပဲ။ ဒါကတခြားတစ်ယောက်ယောက်အတွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လား။
01 မှာ 19 / 2013 / 9: 31 ညနေ
by amalehuman12 ရက်ပတ်လုံး
NoFap မှလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် MO ကိုလွန်ခဲ့သော ၁၂ ရက်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ PMO မရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NWS ပစ္စည်းတွေကိုငါသွားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ရှောင်ရှားရန်ခက်ခဲသောကြောင့် fap မဟုတ်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ HD တွင်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအချို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ငါတိုက်တွန်းမှုများရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုကိုပြန်လည်ရယူရန်ဤအရပ်မှပြန်လာသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားအရာများနှင့်အာရုံပြန့်ပွားစေခြင်းကဒီကိုပြန်လာခြင်း၊ ကောင်တာကိုကြည့်ခြင်း၊
ငါ porn ကငါ့ကိုနှိုးဆွပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ porn ကိုကြည့်မဖြစ်သင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ၉ ရက်ခန့်ကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုတွေ့သောအခါသူမကွဲပြားသောအဝတ်အစားများသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်ရုံဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ချွေးအင်္ကျီတွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့သူမနဲ့အတူနေဖို့တိုက်တွန်းချင်လို့ပါ။ ဒီနေ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ပြင်ပဘဝမှာ၊ ငါဟာလူမှုရေးအရပိုပြီးရှက်ချင်၊ ရှက်တတ်တယ်။ ဤသည်မှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာရလဒ်များမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏ရလဒ်လား၊ မသေချာသည့်နေရာဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်သာရှိနေခြင်းကငါရှောင်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်ရန်ခြုံငုံ။ တိုးမြှင့်လာသည်ကိုခံစားရသည်။ မိန်းကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အသံသည်တုန်လှုပ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်စကားပြောရန် ပို၍ လိုလားသည်။ အတန်းဖော်အသစ်များနှင့်မိတ်ဆွေဟောင်းများရော။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကမပြောင်းလဲသေးဘူး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားနေတုန်းပဲ။
ကိုယ့်ငါ့ကိုပင်ပန်းစေပျင်းစရာ (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပုံမှန်အတိုင်းထက်ဒီတော့ပိုပြီး) အကြောင်း, ငါ့ကိုမိန်းကလေးများစကားပြောသည့်အခါဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ချငြိမ်သက်လျက်နှင့်မရန်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းခဲ့ fapping ထင်ဖို့အသုံးပြု, ဒါပေမယ့်ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်၌တည်၏။ ဤသည်ကဒီမှာမဟုတျဘဲကဒီမှာအပေါငျးတို့သ vets အဘို့အကြောင်းအထောကျအကူကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပို့စ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်မရှေ့ဆက်မယ့်ပိုပြီးအောင်မြင်မှုပုံပြင်များရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
01 မှာ 21 / 2013 / 7: 37 ညနေ
အစဉ်အဆက် fapping ဘဲငါပဌမလ။
by EPIC_BAGELS900031 ရက်ပတ်လုံး
ကျွန်ုပ်မှာစွမ်းအင်များများပိုရတယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်။ ကျိန်းသေထိုက်တန်ပါတယ်။ လူမှုရေးအရအဆင်မပြေတဲ့ပင်ဂွင်းလိုငါခံစားနေတုန်းပဲ။
01 မှာ 28 / 2013 / 5: 53 နံနက်
အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ fapping သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုကွောငျးတှေ့?
ငါလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အကြီးအကျယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော relapse အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ - ငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပေါ်သွားလိမ့်မယ်။
ဤနေရာတွင်အကြှနျုပျ၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်မှဒီလိုပြောပြတယ်။ တိုက်ရိုက်အမျိုးသမီးတွေချဉ်းကပ်ဖို့ related, ဒါမှမဟုတ်ဘာမှကိုတိုက်ရိုက် fapping သို့မဟုတ်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖွင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဲ့သို့ fapping အပြင်ဘဝမှာအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည်, မကြာသေးမီကဤအရာသည်ငါ့ရက်သတ္တပတ် nofap ထက်ငါ့ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည် ၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ခြင်း (ဤအရာအားလုံးသည်ယေဘူယျအားဖြင့် phasic ဖြစ်သလော) သို့မဟုတ် fapping အားလုံး၏အချက်တစ်ချက်ဟုတ်မဟုတ်မသေချာပါ။
Fapping သည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့အဘို့။ အခုငါပိုပြီးမျှမျှတတနှင့်ရှင်းလင်းသောစိတ်တစ်ခုလုံးအများကြီးခံစားရတယ်။ ဤအရာသည်သင်၏ဘ ၀ နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသော်လည်းသင်မနှစ်သက်သောအရာများဖြစ်တတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤသဘောပေါက်ခြင်းကသင့်အားစိတ်ပျက်စေနိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်တာကအရာရာတိုင်းကိုလုပ်နိုင်တာပါ။ တဖန်ငါကဲ့သို့ကိုယ်ခံစားရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လုံးလုံးငါတကယ်မိုက်မဲတဲ့အရာတွေကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါတွေကိုငါ့ခေါင်းထဲမှာထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေတယ်။ အခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ငါ fapping သငျသညျကနေဝေးယူခံစားရတစ်ခုမှာသင်ပါ! ငါပိုကောင်းအောင်ရှင်းပြနိုင်မယ်လို့တကယ်ပဲဆန္ဒရှိပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့အဲဒါကမင်းကိုပိုကောင်းစေတယ်လို့ငါထင်တယ်။
တစ်လကြိုးစားပါ, ပြီးတော့ပြန်ငါ့ထံသို့ လာ. သငျသညျစိုးရိမျခံစားရရှိမရှိငါ့ကိုပြောပြပါ။
ငါတကယ်သိဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့လူမှုရေးအခြေအနေတွေမှာငါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့သလဲ။ သင်၏တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်သင်နှင့်အတူတကွသင်နှင့်အတူတကွသင်နှင့်အတူတူနေခြင်း၊ သင်ဟာစက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာကြာပြီး၊ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာကြာပြီး၊ လူမှုရေးအခြေအနေအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့် volumes ကိုပြောဆိုသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အသုံးအနှုန်းများကိုဝေမျှသည့်ထိုနားမလည်နိုင်သောအချိန်လေးကိုသင်သိပါသလား။ သူတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်အဖြစ်ခေါ်ဆိုပါ၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်ကြောက်သောအချိန်လေးများကိုပင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အုပ်စုရှိလူတိုင်းထိုတွင်ရှာတွေ့သည့်နေရာတွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခြေရာခံရာနေရာဖြစ်သည်။ ယခုငါဖော်ပြလိုသောသဘောထားနှင့်ကျွန်ုပ်ခံစားချက်သည်ထိုအတိုင်းဖြစ်သင့်သကဲ့သို့တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းလာသည်။ ကျွန်တော့်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးစကားမပြောဖို့မတားဆီးနိုင်ပါ။ အရာအားလုံးဟာပိုပြီးသဘာဝကျပြီးကလေးဘဝတုန်းကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ။
အလေးအနက်ထားပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်လပေးပါ။ မင်းဟာမင်းကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး၊ မင်းထင်တဲ့အတိုင်းဒီထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ချဉ်းကပ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
01 မှာ 31 / 2013 / 10: 47 ညနေ
အသက် ၄၇ နှစ်ရှိပြီ။ အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ
by Gus36024 ရက်ပတ်လုံး
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ၂၅ နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်ဟာအသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး Nofap နဲ့အတူလူငယ်စမ်းရေတွင်းတစ်တွင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ငါဟာစွမ်းအင်ပြည့်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါအရမ်းကြောက်မိတယ်။ လူသားငါကြိုးစားအားထုတ်သည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြေးသည်။ ငါလွန်ခဲ့သောအနှစ် 25 ကဒီလုပ်နေခဲ့လိုရှိ၏ငါခမ်းနားခဲ့ကြလိမ့်မယ် !! ဒီ testestorne တက်သည်တက်လျှင်, ငါဂရုမစိုက်ပါဘူးငါ Nofap ကောင်းသည်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်သောအဘယ်သူမျှမသာ !! ငါဆက်နေရန်လိုအပ်သည် ဒီတော့လျှင်မည်မျှကြာရှည်သနည်း။ ဒါဟာထာဝရဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ မှန်တာမှန်ပါတယ်။ သငျသညျလူငယ်တို့, ယောက်ျားလေးများယခုဤအမှုကိုစတင်ရန်ကံကောင်းပါပြီ၊ ငါလုပ်ခဲ့တုန်းကတွေ့ရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ အခုတော့ငါတကယ်တော့ငါ့အဖိုးကြီးမကောင်းတဲ့မြည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် !! ကံကောင်းပါစေလူကြီးလူကောင်း !!!
02 မှာ 02 / 2013 / 11: 25 ညနေ
အားဖြင့်2hoursago Kibnel
ဒီတိုတိုလုပ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ လလုံးလုံးကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ကံမကောင်းခဲ့ပါ။ နှစ်ပါတ်အပျော်တမ်း fapstronaut အဖြစ်ငါနှင့်အကြား၌ 15 ရက်ထက်နည်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့်ကျွန်တော့်အသင်းမှထွက်ခွာရန်စဉ်းစားခဲ့ဖူးသောအဟောင်းကကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှု၊ ကျေနပ်မှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များကဲ့သို့သောအားနည်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
02 မှာ 04 / 2013 / 3: 36 ညနေ
သန့်ရှင်းသောဘုရား Shit, ဒီပစ္စည်းပစ္စယတကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းသောဘုရား shit, ဒီပစ္စည်းပစ္စယအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျပြန်သွားတော့မယ်ဆိုရင်, FUCK NOW ကရပ်တန့်ပါ။
ငါ ၆ ရက်လောက်ထိထိခဲ့တယ်။ ဒီအသစ်စက်စက်ဘဝသက်တမ်းဟာငါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့စိမ့်ဝင်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဤမျှမိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ရန် ပို၍ သြဇာသက်ရောက်သော၊ ယုံကြည်မှုရှိသူ၊ ဤရွေ့ကား,6fuck ဆိုတဲ့ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူနှင့်အတူ fapstronaut သွားနေပါ၊ ဤခရီးသည်လုံးဝကျိုးနပ်ပါသည်။
02 မှာ 04 / 2013 / 11: 00 ညနေ
အနည်းဆုံးငါထင်ပါတယ်။ ငါ NoFap စိန်ခေါ်မှုကိုတိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်နေသောချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးကောင်တာကောင်တာတစ်ခုကိုမတပ်ဆင်ထားသေးသော်လည်း ၂၁ ရက်အထိကျွန်ုပ်ထိခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့လူမှုရေးဘဝအပြောင်းအလဲဟာကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ မှာသာမကကျွန်တော့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝမှာပါသိသာထင်ရှားပါတယ်။ အပြောင်းအလဲသည်လိင်ကွဲပြားမှုမျှသာမဟုတ်ပါ။ လိင်မှုကိစ္စနှစ်ခုလုံး၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျွန်ုပ်အားနွေးထွေးစွာဖြင့်အပြုသဘောဖြင့်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ NoFap မတိုင်မှီကကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိရေစီးကြောင်းကိုရေကူးနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝဟာလည်းပွင့်လန်းခဲ့တယ်။ ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းနေခဲ့သူ၊ အလုပ်သွားရန် မှလွဲ၍ အိမ်မှထွက်ခွာ။ မကောင်းသောဆက်ဆံရေးမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူဖြစ်သည်။ NoFap မှသူငယ်ချင်းဟောင်းများနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးလူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများလည်းမရှိခဲ့ပါ။ အရာအားလုံးစိတ်အေးလက်အေးခံစားရပြီးအရာအားလုံးစီးဆင်း။ ငါအခြေခံအားဖြင့်တရားရုံးကိုင်။ အရမ်းကောင်းတယ်
ငါသာအားပေးမှုပေးဖို့ငါ့အအနေအထားဖြစ်နိုင်သည်သောထိုယောက်ျားများအဘို့အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးအနည်းငယ်အပိုင်းအစမျှဝေချင်တယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ အပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် NoFap နဲ့ငါ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကငါနဲ့တူတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာရှိရမယ်ဆိုတာကိုငါယုံအောင်သေချာနေတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ 🙂
02 မှာ 06 / 2013 / 5: 09 နံနက်
NoFap သည်မြူကိုရှင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ပထမအဆင့်ကိုလုပ်ရ ဦး မည်
NoFap ကကျွန်တော့်အတွက်ကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုစိတ်ထဲတွင်“ မြူမှုန်” မည်မျှရှိနေသည်ကိုယခုအချိန်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လာရပြီ ဖြစ်၍ ရုတ်တရက်အိပ်ရာမှနိုးလာခြင်း၊ အိပ်ချင်နေခြင်း၊ အတန်းများကိုရှောင်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ရုတ်တရက်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားသည်။ အခုတော့အိမ်အပြင်ကိုထွက်ဖို့ဆိုတာဒီလိုအတားအဆီးလို့မထင်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိသည်။ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုပြုပြင်ရန်အချက်များ၊ အရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာယူဆောင်သည်။ သို့သော်ဤအမှုများအားလုံးရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးအများစုနှင့်စကားပြောရန်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဟူသောအချက်ကိုမပြောင်းလဲခဲ့ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်ဆီသို့လမ်းလျှောက်နေသည်ကိုတွေ့သောအခါတိုင်းသူမနှင့်သူစိမ်းများနှင့်စကားပြောရန်အဆင်မပြေပါ။ ငါထင်တာကတော့ငါလုပ်ရမယ့်အရာပဲ။
ဒါပေမယ့်အချက်ပါပဲ။ NoFap သည်ဤပြissuesနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အား၎င်းတို့ကိုဖြေရှင်းရန်သင်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်မဖြေရှင်းနိုင်သေးသောအချိန်တွင်၎င်းတို့သည်မဖြေရှင်းနိုင်သောအရာများ၊ သို့မဟုတ်သူတစ်ပါး၏အမှားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိုးစားရန်ခက်ခဲလွန်းလိမ့်မည်။ ငါ NoFap မချိန်းတွေ့ခဲ့အဘယ်ကြောင့်အရင်ကဖူးပေမယ့်ရုတ်တရက်ငါအွန်လိုင်းရှာဖွေနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးခိုင်းမယ့်အစားတောင်းတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ၊ မီးတောက်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမိခြင်း ငါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေဖန်တီးပြီးသူတို့ကိုကျော်သွားတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးခဲ့တယ်။
ဂရိတ် Post ကို! ငါတကယ်ဆက်စပ်နိုင်သည်
ငါ PMO ကိုအလွန်အကျွံသုံးသောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘာမှမဂရုမစိုက်ပါ။ အသုံးပြုခြင်းပြီးနောက်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည်ကျွန်ုပ်အားဘာမှလုပ်လိုစိတ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းတို့ကိုစိတ်ရှုပ်စေသောအသွင်ပြောင်းသွားသည်။
မကြာသေးမီကငါ PMO မပါသည့်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်, ကြီးမားသောပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ရေးမဖြစ်ပေမယ့်, အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာဖြစ်ကြသည်။ ငါသဘာဝကျကျတစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးပိုကောင်းခံစားရသည်။ ငါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားနိုင်ပြီးငါလေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့လူများတက်ကြွသောအမှုအရာလုပ်ဖို့လူတွေစကားပြော, ထွက်သွားစသည်တို့ပိုမိုလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်။
ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါနဲ့ထပ်တူထပ်မျှခံစားရတယ်၊ ငါနင့်ကိုအတော်လေးတူညီတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းသက်သာစေသောဆေးနဲ့တူတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင် ဆက်၍ တွေ့ရလိမ့်မည်သေချာသည်။ ပထမကြိုးစားမှုများတွင်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ယင်းသည်ရပ်တန့်သွားသည်ဟုထင်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာရန်မိမိကိုယ်ကိုပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းနောက်မှသာပြန်လည်ခံစားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ အရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်၊ မဟုတ် relapse ပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ပင်ပျက်ကွက်နှင့်အတူရက်ပေါင်း၏တူညီသော) ကိုစုံတွဲတစ်ခုခုလာပါတယ်။
02 မှာ 07 / 2013 / 4: 18 နံနက်
နယူးကဒီမှာ fapstronaut နှင့်ချက်ချင်းရလဒ်များကိုနေဖြင့်အံ့အားသင့်စေ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ၂/၀၁/၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ စ၍ ကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်သည် (ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်အမှတ်အသားမှားသည်ကိုသိသည်) ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးဟုပြောရန်လိုသည် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်မဟာတော်တော်လေးစကားစမြည်ပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ မိန်းမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာပြproblemsနာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါသဘောကျတဲ့ "Nice Guy Syndrome" ဆိုတာကအမြဲတမ်းပြtheနာရှိခဲ့တယ်။ ငါပြောနေတာကိုငါသိလိမ့်မယ်၊ ဒါကလူတွေကိုကြောက်လန့်စေတဲ့“ friendzone” ထဲထည့်လိုက်ခြင်းပဲ။ ကောင်းပြီ၊ ရက်အနည်းငယ်“ fap free” ဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ IDGAF သဘောထားကိုငါရပြီးပြီ။ ရှင်းပြပါရစေ၊ ငါဟာအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေလိုငါလိုလုပ်ဖို့သဘောတူတယ် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်စကားဝိုင်းတွင်မည်သို့ပင်ရှိပါစေကျွန်ုပ်၏အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုသာပြောခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးတွေကြားချင်တာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ရင်တောင်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုဒီအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများကိုလှည့်ပတ်နေစေတဲ့ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့၊ ပြီးတော့မင်းတို့ဒီအလုပ်ကိုငါပြောမယ်။ ငါသိတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါ့ကိုချီးမွမ်းတာတွေပေးလေ့ရှိတယ်။ (များသောအားဖြင့်တော့ငါများသောအားဖြင့်လက်ခံလေ့မရှိတဲ့) နေ့လယ်စာစားပွဲတစ်ခု၊ ငါဒီသဘောထားအသစ်နဲ့ပဲငါတွေ့ခဲ့တယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့၊ ရှည်ကြာတဲ့စကားတွေပြောနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒီ nofap အကြံဥာဏ်တစ်ခုလုံးကကောင်းတယ်၊ ငါ ၁၅ နှစ်သားကတည်းကတောက်ပနေတယ်၊ ​​ငါမရှိဘဲတစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်ကိုမမှတ်မိဘူး။ ငါဒီခရီးစဉ်ကိုဆက်လက်အဖြစ်အမှုအရာပိုကောင်းဆက်လက်ဆက်လက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်စုံတွဲသည်ငါ့ခါးပတ်အောက်၌ရှိသည်ဖို့ငါစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်းငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ငါကောလိပ်မှာဒီနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲ၌ငါ့ပို့ချချက်ခဲ့သောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူမနက်ဖြန်ငါနေ့စွဲရှိသည်ကြောင့်ငါပဲစူပါ pumped ။ သူမသည်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်နှစ်ကြာလျစ်လျူရှုထားသော်လည်းယနေ့ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းပြီးနောက်သူမနှင့်လမ်းလျှောက်ရန်စာချုပ်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ငါမကူညီနိုင်ပေမယ့်ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ Nofap ကို r / Howtonotgiveafuck နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ya'll ယောက်ျားတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်
TL; DR တစ်ပတ်လောက်ကြာမှမဖြစ်နိုင်သေးပါ။
02 မှာ 09 / 2013 / 1: 51 နံနက်
by Markus23341 နေ့က
ဘာလဲတက်ယောက်ျားတွေ / gals အားလုံးညာဘက်?
အဆိုးဆုံးသတင်း - ကျွန်ုပ်သည်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည့် ၁၃ ရက်အကြာ fap free နှင့်ရက် ၂၀ အတွင်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော (၄) ရက်ကကျွန်ုပ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ချိုချိုသာသာဖြစ်ခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သည့်ညကအလွန်ပြင်းထန်သောခံစားမှုဖြင့်ကျွန်မ၏ပေါင်ခြံareaရိယာသည်မီးလောင်သွားသည်။ ငါညနှင့်ယနေ့နံနက်မှတဆင့်လုပ်ပေမယ့်ငါအားကစားရုံကနေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအလွန် vanilla ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ချိန်က PMO'd ။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပေမဲ့မထိုက်တန်ဘူး ။( ။ ငါလုပ်ပြီးတာနဲ့ငါဟာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့အချိန်ကိုပြောခဲ့တယ်
ကောင်းမွန်သောသတင်း: အဲဒီအတိတ် 13 ရက်, သူစိမ်းတွေနဲ့ amock, ယုံကြည်ချက်ကျော်လွန်စွမ်းအင်, ကျပန်း convos running စိတ်ခံစားမှုအကြီးဖြစ်ရပြီနှင့်အာရုံစိုက်ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 13 ကာလ၏အကျဉ်းချုပ်
–– ရေကူးခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခြင်းသည်ကောင်းသော်လည်း PMO လွတ်ပြီးရက်အကြာတွင်ရေကူးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအမြင့်မှာ ၁၀ ဆပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
–– ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းနှင့်ဆေးခန်းတွင် (အနှိပ်) တွင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အလွန်ကိုငါ့ clients များနှင့်အတူညှိအတွက်ခံစားခဲ့ရသည်။
- ဘွဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် / စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံအချို့ကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။
–The Streak စဉ်အတွင်း 3x အကြောင်းကိုယူ။ ကြီးမြတ်ခံစားရတယ်။
- ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာပြင်းထန်သော်လည်းထူးဆန်းစွာပင်အားရကျေနပ်မိပါသလား။ နာကျင်မှုရှိခဲ့ပေမယ့်သိပ်မဆိုးခဲ့
ဒါကြောင့်လာမယ့် 20 ရက်ပေါင်းရပ်တန့်!
02 မှာ 26 / 2013 / 7: 30 ညနေ
CharlesBubba ဖြင့်ပြုလုပ်သည်38 ရက်ပတ်လုံး
ငါ၏အ fapping နေ့ရက်ကာလ၌အဘယ်အရာကိုမျှအစစ်အမှန်သလိုပဲ။ ငါ့ရဲ့ dopamine receptors တွေကိုကြော်ပြီးပြီ။ ဘဝမှာဘာမှမှငါ့ကိုပျော်ရွှင်မှုမရခဲ့ဘူး။ အရာအားလုံးသည်မီးခိုးမြူများ၊ ဆိုးဝါးသောအိပ်မက်များဖြစ်သည်၊ ညတိုင်းအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာဘုရားသခင်ဆီဆုတောင်းပြီးကျွန်မကိုအိပ်ပျော်စေဖို့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်။ အခုတော့ငါစိတ်ထဲသူ့ဟာသူပြန်လည်ထူထောင်နေသည်။ ငါ့ ဦး နှောက်ပတ်ပတ်လည်တွင် dopamine လည်ပတ်မှုပိုများသောကြောင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပျော်မွေ့သည်။ ရေကူးခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်၊ ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အပြုံးကကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်၊ အစာသည်အရသာရှိပြီးကော်ဖီသည်ကျွန်ုပ်ကိုနှိုးသည်။ ငါကုလားကာကိုလွှင့်လိုက်ပြီ။ အခုတော့အဖြစ်မှန်ဟာမြူခိုးမဟုတ်တော့ဘူး၊ ငါတကယ်နိုးနေတယ်။ ငါ၏အ NoFappers ရှူရှိုက်သွားဆက်လက်သွား။ လမ်းကခက်ခဲတယ်၊ ဒါပေမဲ့ရလဒ်ကကျိုးနပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်တစ်နှစ်အတွက်ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ခုန်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုတိုးပွားစေသည်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့အခြေအနေမတိုင်မီမှာတောင် ၉ နှစ်တာတစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဟာအများကြီးပိုကောင်းတဲ့ဘ ၀ ကိုရရှိနိုင်တယ်။
သို့တိုင်ယခုနောင်တသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကစိတ်ခံစားချက်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဘဝဟာငါ့ဘဝဆီပြန်လှည့်လာပြီဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတွေပိုတိုးလာတယ်။ ငါဟာစိုးရွံ့စက်ရုပ်တစ်ရုပ်မဟုတ်တော့ဘူး၊ နောက်တဖန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။
03 မှာ 03 / 2013 / 3: 37 ညနေ
NoFap စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူအကူအညီ OCD စသည်တို့ပါသလား
ဤနေရာတွင်မည်သူမဆိုစိုးရိမ်ပူပန်-related မမှန် / ပြဿနာများမှပင်ဆင်းရဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကနေ abstinence တစ်အချို့ငွေပမာဏပြီးနောက်မည်သည့်တိုးတက်မှုများကြုံတွေ့တတ်သလော
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေ? ဟုတ်ပါတယ်။ လုံးဝ။
တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကကွန်ပြူတာပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူမှုရေးကိုစတင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်တွေကိုကွန်ပြူတာမှာသုံးခဲ့တယ်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့အကြည့်နဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုဘ ၀ သစ်တိုးပွားလာခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည့် watchin porn အဆုံးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာမရှိသည့်အချိန်တွင်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်မိသည်။ ငါအကြီးမားဆုံးအရာကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရတာလို့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကွန်ပြူတာတစ်လုံးပျက်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာငါဟာအပျိုစင်ဘ ၀ နဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံပြီးသားပါ။
အခုဘဝကိုပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့ညစ်ညမ်းတဲ့စားသုံးမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေအကြားဆက်နွှယ်မှုအမြဲရှိနေတယ်။ အဲဒီနှစ်တွေကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါသူငယ်ချင်းအများကြီးရတယ်၊ မိန်းကလေးစုံတွဲတွေစုံတယ်၊ ငါဟာကမ္ဘာရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေသလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုနှိမ့်ချနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဘာမှမရှိဘူး။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါကွန်ပျူတာအသစ်တစ်ခု ... ထိုအခါတဖန် PMO မှစတင်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်မှာငါဟာအလွန်အမင်းနက်ရှိုင်းတဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအိုးများများနဲ့ပေါင်းပြီးငါ့ဘ ၀ နဲ့ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူး။
သို့သော်ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို (အတော်လေး) တိုတို…ယခုငါစုစုပေါင်းလူထုံများလိုခံစားမိသည်၊ ၎င်းကိုသဘောပေါက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်များစွာယူရသည် (ကျွန်ုပ်သည် ၂၇ နှစ်) သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာကျန်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအပြင်းအထန်မပါဝင်နိုင်တာကိုငါဝမ်းသာတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ။ ဘဝဟာနောက်တစ်ခါပြန်ရှင်သန်သင့်တယ်။ ငါကျန်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူလွယ်ကူစွာနေ့တိုင်းရှာတွေ့တယ်။
ငါ OCD ရှိတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အရမ်းဆင်တူတယ်ထင်လို့ငါ fapping ဖြစ်တဲ့အခါအိမ်သာစက္ကူတွေအားလုံးကိုငါစွန့်ပစ်မယ်၊ ငါသုတ်လို့ရရင်စာသားကို ၁၀ ကြိမ်စစ်ဆေးမယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ "OCD" ရဲ့အဓိကလက္ခဏာဖြစ်တယ်။ ငါ fap မရှိတော့တဲ့ငါ့ OCD ဟာ ၉၀% ကုန်သွားပြီ။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာတစ်ခုကအိပ်ယာမဝင်ခင်အိမ်တံခါးကိုပိတ်ထားတာလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။
ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်း (ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ လူမှုရေးအခြေအနေများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောမကျေနပ်မှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်) ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီး Nofap သို့အမှန်တကယ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေသည်။ ငါက (၁၀ ရက်အတွင်းအကောင့်နှစ်ခုကိုဖြတ်ပြီး ၆ လကျော်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီ) ဒါပေမယ့်ဒီဆယ်ရက်အကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ငါရှောင်ရှားရန်လုပ်ခဲ့သည့်ငါ့အလုပ်ဖော်များနှင့်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာစကားပြောခဲ့သည်။ ocd နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိသောကျွန်ုပ်၏အတွေးများ၊ ငါ fapping မပိုအလေးထားလာတာနဲ့အမျှသူတို့ပိုကောင်းလာကြတယ်။
ငါ fapping မဟုတ်အစအဦး, မဆုံးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငါ fapping ရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါသူကငါ့ကိုတိုးတက်မှုလိုအပ်သောငါ၏အသက်ရှည်သမျှဒေသများစဉ်းစားရန်အချိန်ကိုပေး၏။ ထိုလူအပေါင်းတို့အခမဲ့အချိန်နှင့်အတူငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပိုကောင်းဂရုစိုက်လာတယ်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ကြိမ်နှုန်းမှာကျန်းမာသန်စွမ်းမြေတပြင်လုံးအစားအစာများစားသုံးခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်းစတင်, ငါ့သကြားစွဲလမ်းပေါ်ပြန်ဖြတ်ဖိန်းဓာတ် * ရပ်တန့်, ကျန်ကြွင်းသောအစိုင်အခဲညရရန်သေချာစေ 103 ရက်ပေါင်းကျော်ဘို့စီးကရက်နှင့်အတူအမှုကိုပြုပါပြီ။
ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ၏ဤပြproblemsနာများရှိခဲ့ပါတယ်။ porn ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းကအစပိုင်းမှာသူတို့အားလုံးကိုပိုဆိုးစေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကရုပ်သိမ်းတာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ၊ သင် porn သည်သင့်အားဤပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုသင်ထင်လျှင်မူတည်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ သင်သည်ဤအရာကိုပြောသောအခါ၊ မင်းကိုမင်း fapping လို့ပြောမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင်မင်းနဲ့ငါမှာလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တယ်။ တကယ်တော့ငါ fapping ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်အလွန်လျင်မြန်စွာအလွန်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာ ၁၀၀% မခံစားသေးဘူး (ဒါမှမဟုတ် ၁၀၀% ကငါ့အတွက်ဘာလဲ) ငါသည်သင်တို့ကိုအခက်အခဲစတင်လျှင်, သင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူစကားပြောလိုပေမည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကသင်ဤအတူမျှဝေချင်တယ်။ ကံအကောင်းဆုံး
ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်း hocd ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်အသက် ၁၇ နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ။ (၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ Google ကမင်းကိုအရာအားလုံးကိုငွေပုံးထဲမပေးခင်) ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအရာသည်မည်သည့်အရာကိုမျှမသိရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်အလွန်အမင်းမတူကွဲပြားသောအချိန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၈ နှစ်နာကျင်ကိုက်ခဲသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်းနောက်ဆုံးမှသိရှိလာရပြီး၊
ငါ hocd ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့ငါ့ရဲ့အပြုအမူကိုဖော်ပြဖို့စိတ်ကူးကိုလက်ခံဖို့လအနည်းငယ်ကြာခဲ့တယ်။ ငါ cbt ကုသမှုကိုရှာယူ။ ငါ့မိသားစုထံမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောပြောချက်နှင့်ထောက်ခံမှုအများကြီးမှတဆင့်ငါပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အခုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ငါဟာငါ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ၁၀၀% hocd ဆိုတာရှင်းနေတာပဲ။ ငါလိင်တူချစ်သူ porn အချို့ကို ဦး ဆောင်သောအကြှနျုပျ၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ porn နှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်း - သွေးဆောင် hocd မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့် porn, ငါသည်သံသယငါ၏အကန ဦး မေးခွန်းထုတ်တစ် ဦး အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Flash ကိုရှေ့ဆက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှငါ့ hocd သဘောထားတွေကိုမှေးမှိန်ခဲ့စဉ်ငါနေဆဲငါကခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းမရှိဘဲလူမှုရေး setting တွင်လိုချင်သမျှအတိုင်းပြု / ပွောနိုငျသောကွောငျ့ (ကတကယ်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်သောပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့အကျွမ်းတဝင်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြုံနေရခဲ့ကွောငျးကိုသတိပွုမိခဲ့သည် လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာ) နှင့်ကျနော်နေ့ကအသက်တာကိုငါ့နေ့ရက်ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသေဆုံးသူတာခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကနှင့်မွေးမြူရေးရှိခဲ့ပါတယ်။
hocd သည်အဓိကအင်အားစုဖြစ်သော်လည်းအခြား ocd နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြaနာများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သတိမထားမိခဲ့သည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်မိသည်။ ငါရောဂါလက္ခဏာအများစုကိုမိမိကိုယ်မိမိစကားပြောခြင်းနှင့်သတိ / cbt မှတဆင့်ခွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းသူတို့သည်သတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်တိုက်ခိုက်ရန်ခက်ခဲသည်။
အခုဒီလှည့်ပြီးသွားနေတဲ့ဒီပုံပြင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာပါ။ အဲဒီ ၁၀ နှစ်လုံးလုံးတစ်နေ့ကို ၁ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိကျွန်တော်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများအရကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏“ စစ်မှန်သော” တိမ်းညွတ်မှုနှင့်“ ကိုက်ညီ” သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကို dudes များမစဉ်းစားရန်အတင်းအကျပ်ရပ်တန့်သည့်အခါ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါ။ အဲဒီအစားငါမိန်းကလေးများနှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ကူးယဉ်သွား။ "ဖြောင့်" porn ကိုကြည့်ခြင်းငှါငါနောက်ဆုံးတော့ငါမမှန်ကန်ကြောင်းပြောငါ့ကိုခေါင်းထဲမှာအသံမပါဘဲနိုင်ဘူး။ အခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာနေလို့ဒီဟာကအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ် ငါ fapped နှင့်ခတ်, ငါသည်ငါ့အတိတ်ပြissuesနာများကိုကျော်လွန်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ထင်ဆက်လက်။
ငါသိတဲ့အချိန်တစ်လျှောက်မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့အသံတစ်သံထွက်လာတယ်။ “ ဒီအဖြစ်အပျက်ကမှားတယ်၊ မပျော်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွဲသုံးစားမှု၊ သင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ” စသည်။ စွဲလမ်း၏အမူအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကထွက်ပိတ်ဆို့ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ DE ကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်စေပြီးနောက်ငါ NoFap ကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လူတိုင်းသည်သူတို့၏ရလဒ်များကိုကွဲပြားခြားနားစွာတင်ပြကြသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်အမြင်များနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်သံလိုက်ဝါဒများအပြင်ကျွန်ုပ်၏ယေဘူယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းဖော်ပြသည့်အရည်အသွေးများစွာကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ ငါ ၁၀၀x ပိုပိုပြီးလူမှုရေးနှင့်ထွက်ခွာလာသည်။ အရှုံးကိုမကြောက်တော့၊ ငါလည်းနည်းနည်းရင့်မှည့်လာသည် (အတိတ် / ပစ္စုပ္ပန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု)၊ ကျွန်ုပ်သည်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်လာမှု ၇၀% လျော့နည်းသွားခြင်း၊ ငါဟာလူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတောင့်တနေတယ်ဆိုတာကိုတမ်းတနေတယ်၊ ​​ငါဟာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်။
အမှန်ကတော့ကျွန်မအသက် ၁၇ နှစ်သာရှိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ပိုပြီးပညာရှိတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတာတွေ၊ ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝတွေကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိတာပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ဘဝဇာတ်ကြောင်းတစ်ဝက်ကိုသင်၏ပို့စ်တွင်တင်လိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း၎င်းထွက်ပေါ်လာသည့်အခါထွက်ပေါ်လာခြင်း o ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ကျွန်ုပ်တုိ့ ocd ရှိသူများ မှလွဲ၍ မည်သူမဆိုဤစာဖတ်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ လေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအားအခြားပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုရန်။ အဆိုပါ OP အဘို့ငါ TL post လိမ့်မည် DR ငါနှင့်အတူသင့်ရဲ့ reddit အိမ်ခြံမြေမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
TL; DR: PMO ဟာ NoFap မရောက်ခင်အထိကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ အခုငါတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသူဟာတစ်ခုတည်းသောအကြီးမားဆုံးပံ့ပိုးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
04 မှာ 17 / 2013 / 3: 29 ညနေ
Bossrun ၏ရက် ၁၀၀ အစီရင်ခံစာ
ဒီ shit အစစ်အမှန်အဘို့ဖြစ်၏ TLDR- ။
07 မှာ 07 / 2013 / 8: 54 ညနေ
အဘယ်သို့ငါစူပါ beta ကိုမှ, Superman သွားနေပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါအရိုးရှင်းဆုံးလှည့်ကွက်နဲ့ငါ့4တစ်နှစ်စွဲရိုက်နှက်နေပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါစူပါ beta ကိုမှ, Superman သွားနေပါတယ်။
by AnonymousNo 12 ရက်ပတ်လုံး
ဟုတ်တယ်၊ ငါသိတယ်၊ ဒီခေါင်းစဉ်ကဒီစျေးပေါတဲ့ကြော်ငြာတွေနဲ့တူနေတယ်။ “ ၂ ရက်အတွင်း ၆ မိနစ်စာဝယ်ပါ၊ အခုဝယ်ပါ၊ ဒီအတုအယောင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှစ်ဆတိုးပါ။ ” သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်မှုတစ်ပိုင်းတစ်စကိုမျှဝေမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုရှာမတွေ့ပါကသင်၏စွဲလမ်းမှုကိုမည်သို့ရပ်တန့်နိုင်မည်နည်း။ ငါ့ရဲ့အရေးအသားစွမ်းရည်စုပ်နေချိန်မှာငါနဲ့အတူနေပါ ဦး ။
အိုကေ၊ ဒါဆိုငါအခု ၄-၅ နှစ်လောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတာ၊ ပထမတော့သင်သိတဲ့သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစူးစမ်းလေ့လာရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကအမြဲတမ်းအဖြစ်တက်ယူ။ ယခုတိုင်အောင်ပင်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုတကယ်မထိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ငါထင်ခဲ့တယ်။ ငါမတိုင်မီနှင့်အပျိုဖော်ဝင်စဉ်အတွင်းကလုပ်နေတာစတင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်အမြဲတမ်းအဆင်မပြေ kinda လက်နက်ကြီးတွေကောင်လေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၌သူငယ်ချင်းများရှိပြီးမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောနိုင်သော်လည်း၊ ဒါကြောင့်ဒီအထိဆက်ရှိနေသည်။ ငါကအခြားဖိုရမ်များတွင် NoFap ကိုများသောအားဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးတကယ်တော့ရယ်မိသည်။ ဒီလူတွေကသနားစရာလို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါကရယ်စရာပဲ (အခုတောင်းပန်ပါတယ်၊ NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ) ဒါနဲ့အမြဲတမ်းအရမ်းရယ်ရတယ်နှင့်အတူကချွတ် shrubbed ။ ထိုအခါငါတ ဦး တည်း wank သွားလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖိုရမ်တစ်ခုတွင်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါသော်လည်းတစ်စုံတစ် ဦး က Ted ဆွေးနွေးချက်အင်တာဗျူးတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး ငါကပျင်းစရာကနေဖွင့်လှစ်ခဲ့, ထိုသို့ငါ့ကိုတကယ်ထိမိခဲ့တယ်။ ငါကချွတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ငါ့ကို piss မယ်လို့အနည်းငယ်ကို tick ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထိုညတွင်ကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူက“ ငါနှင့်အတူငရဲသည်အဘယ်သို့မှားသနည်း” ဟုခံစားမိခဲ့သည်။ မှန်တယ်လို့မခံစားရဘူး ဒါကြောင့်ငါ post ကိုပြန်လည်လည်ပတ်, ဤ reddit ကိုအခြားဖိုရမ်အတွင်း၌ဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီအကြောင်းအချို့ကိုဖတ်ရှုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုထိမိခဲ့တယ်၊ ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ၇ ရက်ကြာစိန်ခေါ်မှုလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ NoFap ကို ၇ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရလဒ်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုရင်၊ ဖျားနာတာက fapping ကိုပြန်သွားပါ၊ ဂရုမစိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုဘယ်တော့မှမရပ်တန့်နိုင်အောင်မကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး၊ ၂ ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်။ ၃ ရက်အကြာမှာငါပြန်သွားခဲ့တယ် ကျွန်တော် ၁ လလောက်လုပ်ခဲ့တယ် ၃ ရက်တခါငါပြန်ပြောင်းလာတော့မယ်။ ဒုတိယထပ်ပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်ငါကိုယ်တိုင်စတင်ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာအတော်လေးအကြိမ်ကြိမ်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါရဲ့သတ္တိကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်လုပ်နေတယ်လို့ရဲရဲ့ရဲရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိကို။ ငါလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး၊ ငါ ၁ ရက်လောက်ရပ်နားရင်တောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တိုးတက်မှုပဲ အဲဒါကငါ့အတွက်ပဲ။ ငါမှလွဲရင်ဘယ်သူမှငါမဟုတ်ဘူး။
ကောင်းပြီဒီ BS ၏အချို့မှတဆင့်ရှေ့သို့အစာရှောင်ခြင်းကဒီမှာလာ။ ငါဘယ်တော့မှအတိတ်3ရက်ကလုပ်ဘယ်တော့မှ! ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုခြေရာခံလိုက်ခြင်းကသင့်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါဖတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ရက်ပေါင်းများစွာကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်လာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာခလုတ်အချို့သည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုနှိပ်လိုက်သည်။ ငါ့ရဲ့ Reddit ကောင်တာကိုငါထားခဲ့ပြီးနံပါတ်ကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ ငါဘယ်အချိန်မှာဘယ်ရောက်နေလဲငါတကယ်မသိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းသည်ခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်မှုတ်ထွက်လာချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ခြံသည်နည်းနည်းပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ပထမအပတ်တွင်ရှိနေသည်ဟုထင်သည်။ ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေ့တွင်ကူညီမည်ကိုမသိပါ။ ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်စိန်ခေါ်မှုကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ fap light ဟာကျွန်တော့်အတွက်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာပဲနေချင်တယ်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်ပျော်ရွှင်သည်၊ ဝမ်းနည်းသောဥမင်လိုယောက်ျားမဟုတ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုအဓိကဖောက်ဖျက်တဲ့နည်းကတော့ညစ်ညမ်းတဲ့နေ့ဟာတစ်နေ့တာရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့တယ်။ အနည်းဆုံး ၁-၃ နာရီကြာအောင်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အော်ဂဇင်တစ်ခုရရှိရန်ရပ်ပါ။ ထိုအခါငါအအေးကြက်ဆင်ကိုရပ်တန့်ဖို့မထင်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့အကျင့်ဓလေ့တွေကိုမပြောင်းလဲဘဲငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုအစာကျွေးဖို့နည်းလမ်းရှာရတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲကိုရွေးချယ်ခြင်းပဲ။ Prison Break ပြသတာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များ 1 မိနစ် Hulu သို့မဟုတ် Netflix ကအပေါ်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့ငါနဲ့အတူညအချိန်မှာတစ်ယောက်တည်းစပြီးစွဲလမ်းမှုသံသရာကိုဖြတ်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့၊ ငါကြည့်ရတာအနည်းဆုံးတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ချင်တယ်၊ ငါလုပ်နေတာတွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာပိတ်လိုက်တယ်။ Xbox ပေါ်လာတယ်။ လက်ျာတက်ဖွင့်ထောင်ထောင်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မိနစ် ၄၀ ကြာပြသမှုပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိပါကကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ယောက်ကိုကြည့်မည်။ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာကို NO ဟုပြောရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲယူထားသလောက်မြင်ရလိမ့်မည်။ ဤသည်စိတ်ကူးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်ရန်ငါ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှာမနိုင်။ ယောက်ျားများကိုစမ်းကြည့်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင်သင်၏အသည်းအသန်အကြောင်းတစ်ခုခုကိုရှာပါ။ ငါ့အိမ်ထဲမှာကောက်ပဲသီးနှံတွေလည်းထွက်လာတယ်။ ငါနေ့အချိန်၌ fap လုပ်ရန်တိုက်တွန်းခံရသည့်အခါသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏အပင်များကိုရေလောင်းခြင်း၊ သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များအချို့ကိုရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုပြန်သွားပါလိမ့်မည်။ ငါဟာမေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် NoFap ကကျွန်မကိုတကယ့်ခံစားချက်အချို့ရှာဖွေတွေ့ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အပင်များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုမရပ်တန့်စေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အကျိုးရှိသောနှင့်စွဲလမ်းစေသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာပါ။ Prison Break သည်ကျွန်ုပ်အတွက်စွဲလမ်းစေပါသည်။ အဆုံးသတ်နိဂုံးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုလိုချင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲငါရပ်လိုက်တယ်။ ငါအဲဒီလိုတိုက်တွန်းခံရတာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါငါသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုတွေကိုတိုက်ကျွေးဖို့ပြောတယ် (တီဗွီကိုမုန်းတယ်၊ ဒါကဒါကနောက်တစ်ခြားစွဲလမ်းမှုမဟုတ်ဘူး) ဒါကကိုယ့်စိတ်ကိုညစ်ညမ်းစေတယ်။
ဒီတော့အခုအောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်စရာအချိန်များ။ ကောင်းပြီဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာ (ဒီနေ့ဟာ ၄ ရက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုယ်ဟာမီးရှူးမီးပန်းလိုခံစားရတယ်၊ အရမ်းပျော်တယ်၊ ငါကကီကာ့စ်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်ကလုပ်ခဲ့တာပါ) ။ ဒါကြောင့်ငါ့နှမရေကူးသွားဖို့သူမရဲ့စူပါ sexy သူငယ်ချင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ငါအနီးကပ်လာပြီဆိုတာတောင်မှများသောအားဖြင့်ငြင်းလေ့ရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ beta ကိုကြည့်ပြီးသူမကိုပြန်ကြည့်လျှင်ငါ့ကိုပြန်ကြည့်မည်။ ငါက fuck ဆိုတဲ့ကပြောသည်! သူတို့နှင့်အတူရေကူးကန်သို့သွားလေ၏ အင်း၊ ငါကကြက်နဲ့စကားပြောပြီး ၁၀၀% မျက်လုံးချင်းတစ်လုံးလုံးကိုလုပ်တယ်။ (မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများမှာရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရှုပ်ထွေးသောနှစ်ခုမဟုတ်ပါ) သူမ၏အပြာရောင်မျက်လုံးများနှင့်နက်ရှိုင်းသောမျက်လုံးချင်းဆုံမိခြင်းသည်ကြီးမားသော fuck ဆိုတဲ့အလား! ကျွန်ုပ်သိသည့်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်ဖုန်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှောက်၌ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ထားသောစူပါ sexy ကြက်တစ်ကောင်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ ငါသူမရယ်လိုက်တယ်၊ သူမဟာသူမပြောတာကိုသူတကယ်သဘောကျခဲ့တယ်။ သူမထွက်ခွာသွားသည့်အခါသူမသည်ငါ့ကိုပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ သူကကျွန်မတို့ရေကူးကန်ထဲမှာရှိနေတုန်းသူမမှာရည်းစားရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး၊ ငါဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ BF ရှိတာကိုဖြတ်ပြီးအားပေးခဲ့တယ်။ သို့သော်သူကဇူလိုင် ၄ ရက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူမနှင့်စကားပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ကျွန်မမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများတောင်မရှိခဲ့ဘူး၊ သူမအားသူမအားလှည့်စားနေသောပုံစံမျိုးလည်းမပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကသူမတစ်ခုခုကိုကောက်ဖို့ကွေးလိုက်တဲ့အခါမြွေကပေါ်ထွက်လာတာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုငါသတိပေးခဲ့တယ်၊ သူချက်ချင်းပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်။ သူမသည်သူမထွက်ခွာသွားသည့်ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသည်။ မီးရှူးမီးပန်းများကိုချွတ်လိုက်သည်။ (ညအချိန်တွင်ဘယ်တော့မှမမောပါနှင့်၊ များသောအားဖြင့်နံနက် ၇ နာရီအိပ်ရာဝင်ပါ၊ နေ့လည်ထသည်) ငါ 4-4am ကဲ့သို့အိပ်ပျော်, နက်ဖြန်နေ့၌လျောက်ပတ်သောအချိန်၌နိုး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်နိုးလာသည့်နေ့ကစတင်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာလိင်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အားလုံးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးကျပန်းအစာမစားရဘူး။ ကိုယ့်စတုတ္ထအချက်ကိုစဉ်းစားပြီးမကောင်းသောခံစားမှုကိုခံစားမိသည်။ ကောင်းပြီဒီနေ့ငါစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ တခြားလည်းပျော်အောင်လုပ်တယ်။ ငါရေချိုးခန်းသွားတဲ့အခါနဲ့ငါတို့ထွက်ခွာချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုပြုံးပြကြတယ်။ သူတို့ကကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်ကိုမြင်ပြီးသူတို့ကိုချက်ချင်းပြန်ပြုံးသည်။ ငါအရမ်းခံစားရတယ်! ဒါပေမယ့်ဒီနေ့စားသောက်ဆိုင်မှာနေ့လည်စာစားနေရမယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းဟာတင်းကျပ်တဲ့ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ပြီး ၀ တ်စုံတွေ ၀ တ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဒီညနည်းနည်းအနားယူလိုက်ပြီ၊ ငါ့ရဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာတချို့ကိုကြည့်ရတယ်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းပြီးဖတ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကိုယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြခဲ့နှင့်မျှမမိတ်ဆွေများက IRL နှင့်အတူ, သင်တို့ကိုငါယောက်ျားတွေကြားချင်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်နားမထောင်ချင်ထင်။ မည်သည့်စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုစိတ်မကောင်းလြှငျ, မိုဘိုင်း၌တည်၏။
TL; DR: ငါသိလူတို့နှင့်အတူပင်ဖုန်းပေါ်မှာ, စူပါ beta ကို = ငါ့ကိုအဟောင်း။ NoFap များအတွက်နည်းလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ကိုအခုတော့ = စကားပြောနှင့်စူပါ sexy အပြာမျက်လုံးရေကူးဝတ်စုံနဲ့ယင်းနှင့်အတူစူပါ badass မျက်လုံးချင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နေ့ကိုလျှင်အဆုံးမှာသူမကျွန်မကိုပွေ့ဖက်များနှင့်သူမသည်ငါနှင့်အတူပျော်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြောတယ်။
08 မှာ 07 / 2013 / 8: 06 ညနေ
reboot နေဖြင့် Comment
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း - ငါဟာလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုရှောင်ရှားပြီး၊ ဤသည်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မထိုက်တန်ခံစားချက်တွေကိုအတွက်အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။ ငါစကားပြောဆိုမှုများကိုအထောက်အကူပြုရန်အသုံးဝင်သောတစုံတခုကိုမျှမခံစားရဘူး၊ ငါ့တည်ရှိမှုကအခြားသူများအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သည်။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ငါဟာငါ့နှလုံးသားထဲကနေထွက်လာပြီးငါ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုရဲရဲရင့်ရင့်ပြောတယ် - ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလူကိုပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။
(၃၃) နှစ် - ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလူကိုပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။
08 မှာ 09 / 2013 / 9: 03 ညနေ
အဘယ်သူမျှမ PMO စိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်ပူပန်များအတွက်အသက်ကယ်ဖြစ်ပါသည်
PMO ပိုလျှံခြင်းသည်ယနေ့လူများ၌မလိုအပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများနှင့်အမှန်ပင်သက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကလေးဘ ၀ ၏နေရာသို့ပြန်လာပြီးနေရောင်ခြည်၊ ရယ်မောခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့ကဲ့သို့သောအရာများကိုပိုမိုမှန်ကန်စွာခံစားခွင့်ရခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာရိုးရိုးသားသားခံစားမိသည်။ သင်၏ယဉ်ကျေးမှုအားလပ်ရက်ရာသီများ၌သင်ခံစားခဲ့ရသောရွှင်လန်းမှုကိုသတိရပါ။ ကောင်းပြီ၊ PMO တစ်ခုမှသင့်အားတစ်နှစ်ပတ်လုံးထိုခံစားမှုကိုပိုမိုခံစားခွင့်ပေးပြီးထိုအချိန်များအတွင်း၌ပင်ထိုအရာ၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုထပ်မံခံစားရရန်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ဇင်နှင့်ရိုးရှင်းသောအရာများကိုပင်ပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်စေသည်။
PMO မှကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်အဆိုးရွားဆုံးသောလက္ခဏာများမှာစိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံစားခြင်းဖြစ်သည် - အမြဲတမ်းပင်ပန်းသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ပြန်အသက်ရှင်ရန်အလွန်အမင်းဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ ဆိုလိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်တစ်နေ့စောစောစီးစီးသေဖို့တောင်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်မှုမပြင်းထန်လျှင်တောင်နိမ့်ကျခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤသည်ကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်လောက်အောင်မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းကာလများ၌ကျွန်ုပ်၌ရှိနေသောကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းငယ်လေးတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ အဂတိလိုက်စားမှုကင်းမဲ့သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသံကိုပင်မသိတော့ပါ။ PMO သည်တိုက်ရိုက်တာ ၀ န်ယူမှုမရှိသော်လည်း၊ ငါတကယ်ဘယ်သူဖြစ်ခြင်းကနေငါ့စွမ်းအင်ကိုပြန်သိမ်းဆည်းရမိ အသက်ရှင်ရန်ရှင်သန်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်သည် - အချိန် ပို၍ နိုးထလာပြီးပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်၊ သင်၏ဘ ၀ ကိုအဝေးတစ်နေရာမှအိပ်စက်ခြင်းလည်းနည်းသည်။
အို…ငါနောက်ဆုံးမှာငါ့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုရှာလိုက်တယ်။ အဲဒါဟာစစ်မှန်တဲ့မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နားလည်မှုပဲ။ ငါအတွေးအခေါ်နှင့်ငါ့စိတ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဘဝကိုအလေးအနက်ပြန်လည်အကဲဖြတ်ယူသောနေ့ရက်ကာလကိုငါအမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေထိုင်စတင်ခဲ့သည့်နေ့ရက်ကာလဖြစ်ကြသည်။ အမှန်တရားရှာဖွေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်စစ်မှန်သောပင်ကိုယ်မူလကျင့်ဝတ်၏ကျင့်စဉ်အောက်တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ဝေဒနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်သံသယ၏နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကနေငါနေတဲ့နေရာအထိနီးပါးအရာအားလုံးထဲမှာအမှန်တရားအကြောင်းအများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ ထိုအရပ်မှ, ယခုလွန်ခဲ့သော5နှစ်တော်တော်လေးအစိုင်အခဲဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ယခုအခါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်လက်တွေ့ကျကျပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဘ ၀ ၏ ၀ မ်းနည်းဖွယ်အချိန်လေးများကသင့်ကိုဘဝကိုတန်ဖိုးထားလာစေပါသည်။ စိတ်ကျရောဂါသည် ၀ မ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့နေထိုင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်သည်ကိုသိရန်အကြီးအကျယ်ပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်အိပ်မက်များနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသေဆုံးမှုသည်သင်၏ဘဝမှသင့်ထံမှဝေးကွာသွားခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။
အကယ်၍ သင်၏စိတ်ကျရောဂါသည်ယခုအခါသင်ရင်ဆိုင်နေရပါကသင့်ကိုစိတ်ချစေနိုင်သည်။ မင်းမဖမ်းဘူး သင်၏တဖြည်းဖြည်းအတွေ့အကြုံများကသင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကိုစာသားအတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းသည်စဉ်း စား၍ မရသောစိတ်ကျခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ PMO မရှိပါကဤအရာသည်ထူးခြားသည့်ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ သင်အမှန်တကယ်မည်သည့်ပန်းတိုင်များနှင့်အိပ်မက်များကိုအမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန်အကြောင်းများစွာသင်ယူရန်လိုအပ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (ညစ်ညမ်းမဟုတ်) အပြုသဘောဆောင်သည့်အကျိုးစီးပွားများ (အနုပညာ၊ တေးဂီတ၊ အဆောက်အအုံ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို) ပါ ၀ င်သောစမ်းရေချိုကဲ့သို့စီးဆင်းနေရမည်။ ရိုးရိုးလေးရေဖြင့်သာရေးထားတာပါ၊ ဒါကြောင့်ရေချိုကအသက်ကိုပေးပါတယ်။ သင်၏ရေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်သင်၏စွမ်းအင်ကိုမချုပ်တည်းနိုင်သော PMO ဖြင့်သန့်စင်ပါ။
08 မှာ 26 / 2013 / 3: 47 ညနေ
ငါကြီးပြင်းလာတာနဲ့တူတယ်၊ ငါခံစားရတယ်၊ သူမသည်မိခင်၏စကတ်နောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေသည့်ကလေးငယ်တစ် ဦး ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာမှပုန်းရှောင်ခဲ့ဖူးသည်။ အခုငါ PMO နောက်ကွယ်မှမဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုနောက်ကွယ်မှမဟုတ်, ဖုံးကွယ်ကြပါဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်၊ ငါ့အလိုဆန္ဒများ၊
ငါတစ်ချိန်တည်းမှာပိုပြီးဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်တန်ချိန်ပိုမိုစွမ်းအင်ရှိသည်။ ငါထင်တာကဒါကသဘာဝကျတယ်လို့ထင်တယ်၊ အခုငါကနောက်ဆုံးအစက်အနည်းငယ်ကျမှာမဟုတ်ဘဲဓာတ်ငွေ့အပြည့်ဆီအပြည့်စီးတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်ကားမောင်းနေပြီလေ။ အခုကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးနားလည်လာပြီ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနွမ်းနယ်နေပြီးဘယ်သူ့ကိုမှထောက်ခံမှုမလိုအပ်တော့ဘူး။ ငါထွက်သွားနှင့်အရာတို့ကိုလုပ်ဖို့တော့ဘူးကြောက်လန့်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်မခံစားရဘူး; ငါတီးဝိုင်းတစ်ခုဖွဲ့ခဲ့တယ်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်တယ်၊ စိတ်ခံစားမှုတွေခံစားရတယ်၊ ပစ္စည်းပစ္စယတွေဖန်တီးခဲ့တယ်။ ငါ့ဘဝပျက်စီးယိုယွင်းသွားပြီးအခုတော့ငါဟာအနာဂတ်ကိုစတင်တည်ဆောက်နေပြီ။ ငါကိုးနှစ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်, နောက်ဆုံးတော့ငါဘီးပြန်ဖြစ်၏။
ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ - နောက်ဆုံးတွင်ကြီးထွားလာခြင်း
11 မှာ 28 / 2013 / 6: 02 နံနက်
Edging, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ငါ့ယုံကြည်မှုကို
Edging, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ်၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ငါ့ gauge ယုံကြည် !!! တုန်လှုပ်စေသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ !!! ကျေးဇူးပြု။ ဖတ်ပါ!!!
by ChangingChemistry29 ရက်ပတ်လုံး
အိုကေ, ဒါကြောင့်ငါတီထွင်ကြပါပြီ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိ, ယုံကြည်မှုအရှိဆုံးတိကျသော gauge နဲ့ကျွန်မအချို့အတော်လေးတုန်လှုပ်စေသောရှာဖွေတွေ့ရှိငါ၏အမူအကျင့်နှင့်အတူစမ်းသပ်နှင့်ချက်ချင်းရလဒ်များကိုစောင့်ကြည့်စေပြီ။
ယုံတယ်၊ မယုံဘူးလား၊ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းကိုပြောပြရန် - ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပြင်းထန်သောထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာပြhadနာတစ်ခုကြုံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်အားဖယ်ရှားပစ်ရန်အားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့သည်၊ စကားပြောကုထုံး၊ ဆေးကုသခြင်း၊ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးငါအခြေခံအားဖြင့်စကားမပြောနိုင်ဘူး။ “ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်” လို့ပြောဖို့ကျွန်တော့်ကိုစက္ကန့် ၂၀ လောက်ကြာလိမ့်မယ်။ အသက် ၉ နှစ်အရွယ်ကတည်းကနေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ nofap စလုပ်တုန်းကရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအိုင်တီအဝေးကနေ - ငါအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းကိုတင်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာများစွာသောတုန့်ပြန်မှုတွေရပြီးမင်းရဲ့ထောက်ခံမှုကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကြောင်းအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်ချည်တက်ကြည့်ပါ။
ဒါကနောက်ခံအချို့ကိုပေးရုံပဲ။ ၄-၁၀ ရက်များကြာသောကန ဦး ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုမြင့်တက်လာပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စကားထစ်သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစူပါမင်းလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီနောက်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်တော်ကတစ်ပတ်ကြာအပြားထဲကိုဝင်လာပြီးထစ်ငေါ့တဲ့အသံကိုပြန်ယူလာပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မဆိုးပါဘူး ငါ (အပြည့်အဝအတိုင်းအတာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်) ပြားချပ်ချပ်ထံမှပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်ထစ်ငေါ့ပြန်သွားလေ၏။ သတိရပါ၊ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကလာတာ၊ သွားတာ၊ ဒီဂရီတွေအများကြီးနဲ့တိတိကျကျတိုင်းတာတဲ့အရာ၊ ငါ့ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်မြင့်မားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျသူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်၊ ငါအဲဒါကိုထိန်းချုပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်၊ ငါ့မှာစကားအဟန့်အတားမရှိဘူး။
ဝေးလေကောင်းလေ။ နောက်တစ်ခုကမင်းဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ nofap ကြောင့်ပိုပြီးဆိုးရွားစေတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုကျွန်တော်အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် - ငါဖတ်လို့ရအောင်အဲ့ဒီ့ချည်တစ်ချောင်းကိုတင်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကဒီမှာအသေးစိတ်မလေ့လာရသေးဘူး၊ သူမအကြောင်း။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်ကျော်လောက်ကငါသူမကိုမစဉ်းစားမိအောင်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး၊ ညမှာလည်းစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အချိန်တွေမှာအနားယူနေခဲ့ရတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါဟာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ အဲဒါကိုနောက်တဖန်မလုပ်တော့ဘူးလို့ငါကတိပြုထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်တယ်။
ဒါကြောင့်ညသန်းခေါင်မှာကျွန်တော်အဲဒီမှာထိုင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အမှန်တကယ်အနားမကပ်ဘဲထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပေမယ့်သူမအကြောင်းအများကြီးစဉ်းစားနေပြီးငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကဒီထပ်တူဖြစ်ရပ်မှန်များကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အိပ်ရာနှင့်စကားပြောနှင့်နမ်း, သူမ၏လက်ကိုကိုင်ထား, သူမနှင့်အတူပရောပရည်အပေါ်မဟာဗျူဟာများ, အများအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောအရာ, ဒါပေမယ့်ဒီအတွက်သုံးစွဲ အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမခံစားရဘဲအရာအားလုံးသာမန်ပုံရတယ်။ နောက်တစ်နေ့အလုပ်ခွင်၌, ငါ၏ထစ်ငေါ့အနည်းငယ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ ငါကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်ခဲ့တယ် - နောက်တစ်နေ့မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးမထားဘူး - ထိတ်လန့်သွားပြီ။ ငါနောက်တစ်နေ့ထပ်လုပ်တယ်, ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြန်လာ၏။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သတိပြုမိပြီးယင်းသည်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုဟုထင်ရသည်။
ထိုအခါငါပိုဆိုးတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ် - ငါအကြိမ်အနည်းငယ် Edge ။ တစ်ညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင်းနေတယ်၊ ​​နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်မရဲ့စကားထစ်တာကငါစိတ်ကူးယဉ်နေချိန်ထက်ပိုပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြန်ရောက်သွားတယ်။ ထိုအခါငါ2ရက်အဘို့ထိုအမလုပ်ခဲ့ - ထစ်ထရောပြန်လည်ကောင်းမွန်။ နောက်တစ်နေ့ငါ hardcore အကြိမ်ပေါင်းများစွာ Edged - လာမည့်နေ့ကထစ်ကယ့်ကိုဆိုးခဲ့ပါတယ်, နောက်တစ်နေ့ထပ်လုပ်ခဲ့တယ် - ပို။ ပင်ဆိုးရွားလာတယ်။ ရုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကြောင်းမရှိနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ထိုအခါတနင်္ဂနွေသို့ရောက်လာပြီးတနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူမကိုသူမ၏ခေါင်းထဲမှမထုတ်နိုင်တော့ပဲကျွန်ုပ်သည်တစ်နေကုန်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ တနင်္လာနေ့တွင်ထစ်ငေါ့သောစကားသည်အလွန်ဆိုးခဲ့သည်။ ငါမုန်းတီးနေသည့်အချိန်ကဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ် - ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မခံနိုင်တော့ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်မှစ၍ အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသောအဖြစ်အပျက်ကငါ့ရဲ့သီအိုရီကိုတကယ်အတည်ပြုပြီးငါအနားမဖြတ်တော့ဘူး။ အဲ့တာကနေရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက Superman လိုခံစားနေရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်တော် Oed ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ငါတကယ်လို့စတုရန်း ၁ ကိုပြန်သွားနိုင်ရင်စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်
ဒါကြောင့်ငါကဒီသိပ္ပံနည်းကျရှုထောင့်ကနေပဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိပုံရသည်။ တကယ့်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဆိုလိုတာကတော့ငါ fapping ကိုမရပ်တန့်ခင်မှာယုံကြည်မှုမြင့်မားစွာရဖို့စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါရပ်တန့်နှင့်ကသူ့ဟာသူသက်သက်သာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလုပ်အားပေးအရာမဟုတ်ပါ ပြီးတော့ဒါဟာတကယ်အရှက်ကွဲခြင်း (သို့) အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမဟုတ်ပါ။ ငါလှေကားထစ်ကိုငါလုံးဝမေ့သွားတယ်။ ငါသိပြီမထင်ခင်ငါ့ရဲ့ထိတ်လန့်မှုကဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ပြန်လာရတာလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ ၎င်းသည်ဓာတုဗေဒသက်သက်သာဖြစ်သည်။
ငါဒီမှာကစားမှာအဘယ်အရာကို dopamine လွှတ်ပေးရန်အဆင့်ဆင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်ရိုက်ခြင်းသည်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည်လုံးဝသဘာဝမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်မှရရှိနိုင်သည့် dopamine ရိုက်ချက်ကိုရရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခြင်းကခြေတစ်လှမ်းချရုံသာဖြစ်နိုင်ပြီးဆိုးဝါးနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ Edge သည်ဘေးဘက်သို့ ဦး တည်သည်။ အိုမင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင် ဦး နှောက်အပေါ်အဆိုးရွားဆုံးသက်ရောက်မှုများကင်းဝေးပြီး testosterone ဟော်မုန်းနှင့်သုတ်ရည်တွင်ရှိသောအခြားအရာများကိုပါကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျတိကျမှုရှိ၊ မဟုတ်၊ စဉ်းစား သို့သော်သင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုများစွာလှုံ့ဆော်နေဆဲဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ အထူးသဖြင့်ငါဟာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့မင်းနဲ့တူနေပြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစွဲမက်နေပြီးတစ်လအတွင်းမှာမဖြစ်မနေဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ထပ်မံ၍ dopamine သည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအခါကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီနှင့်အနား၏ပမာဏနှင့်သင်ဘယ်လောက်ဝေးသွားကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့စိတ်ရှုပ်စရာမရှိပေမယ့်စိတ်ကူးယဉ်ရုံမျှသာ - ဒီနေရာမှာမင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးကိုမခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသင်ဟာဒီပြင်းထန်သောချစ်ခင်တွယ်တာမှုခံစားနေရပြီးသင်၏အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုကိုစွဲလန်းနေတဲ့အတွက်သင့် ဦး နှောက်မှာဆုလာဘ်အချို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤအရာအားလုံးသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီသည့်ဒီဂရီများဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောအတိုင်းအတာကိုအတိအကျထိန်းချုပ်သည်။ အကြှနျုပျ၏ထစ်ထစ်သိသိသာသာတိကျသော gauge ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုမင်းနဲ့အတူမျှဝေချင်တယ်။ Edging ဟာ ​​Oing လောက်မကောင်းဘူး၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဟာ edging လောက်မဆိုးဘူး။ သင်အားလုံးကမင်းရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးမင်းရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုလျော့ပါးစေတယ်။ ပြစ်မှုနည်းလေလေပြန်လည်နာလန်ထူလေလေ၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်တစ်ခုခုကိုလုပ်သင့်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ဒီစွဲလမ်းမှုတစ်ခုခုကိုမကျူးလွန်မိတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအရှိဆုံးခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့သင်ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒီတာရှည်မှုအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ မင်းကမင်းကိုကူညီခဲ့တယ်၊ သီအိုရီအချို့ကိုအတည်ပြုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်မည်မျှအရေးပါသည်ကိုမှတ်သားလောက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ယုံကြည်မှုကဲ့သို့သောအခြေခံစိတ်ခံစားမှုများနှင့်အခြေခံအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
01 မှာ 28 / 2014 / 11: 30 ညနေ
အပိုင်း 1 -
ကျနော်တို့ဗီဒီယိုများအတွက်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ရှိလျှင် avidly, သူတို့အပေါ်မှာရိုသေလေးစားမှုတစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်အနိမ့်အဆင့်ကိုကြဲသည်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားကဤကြယ်များပြသနေသည်မည်မျှမလေးစားတဲ့ပေါ်, သိလျက်သို့မဟုတ်မသိဘဲ၏ရ။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုပြီးအမှန်တကယ်ဘဝတွင် 'ကဲ့သို့သောပူပြင်းသည့်မိန်းကလေး' ကိုဘယ်သောအခါမျှရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ဟုခံစားနေရသည်။
ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လူတို့သညျ (အစက်မှုလုပ်ငန်းမှ) အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုံ၏မရွေးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သာမန် penises များဖြစ်တတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ၄″ -4 between အကြားဖြစ်နိုင်သည်ထက် ပို၍ နည်းနိုင်သော်လည်းပုံမှန်နှင့်လုံလောက်သည်။ သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိသူများကဲ့သို့ကြီးမားခြင်းသို့မဟုတ်မြဲမြံခြင်းမရှိပေ။
porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ယာယီကျွန်တော်တို့ရဲ့ penises debilitated ပါပြီ။
နိဂုံး - ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုပျော်ရွှင်နိုင်ပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်နိုင်သလဲ။
အဖြေ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်းမှရပ်တန့်ပါ။ မင်းကမင်းကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာလိမ့်မယ်၊ မင်းမိန်းမတွေနဲ့စကားပြောနိုင်မှာပါ၊ မင်းလည်းဖျော်ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
10 မှာ 24 / 2014 / 6: 45 ညနေ
NoFap ငါ၏အ asperger Syndrome, ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား missdiagnosis ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ? fa ခဲ့သည်
im FAP ယခု 10 လက်ထက် မှစ. အခမဲ့နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားငါဘယ်လိုယင်း၏ဖွင့်လုံးဝ unbelieveble ။ ငါပြောနေတာအခါ, ငါလူမှုရေးအဆက်အသွယ်ဘို့တပ်မက်ရှေ့တော်၌လူမျိုး, မိန်းကလေးများဖို့ပြောနေတာငါ, ငါတနေ့လုံး horny ရ, ငါသည်အသကျရှငျခံစားရကြည့်ရှုပါ။
ငါ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာနဖူးညှစ်စပြုလာတယ်၊ ငါ့ရဲ့ပြသနာတွေလည်းစတင်ခဲ့တယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်မှာ Asperger Syndrom ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးအဲဒီကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ အိပ်ရာမှထ။ နာရီ ၂၀ အကြာတွင်အလွယ်တကူအိပ်ပျော်နိုင်သည်၊ ညအချိန်တွင်နိုးပါ။
အခုတော့ fapping မပါဘဲငါအရင်ကထက်ပိုခံစားရတယ်နှင့်ငါအရင်ကဤကဲ့သို့သောခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှ, ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အဘယ်သူမျှမ brainfog, ဤလူအပေါင်းတို့သည်ဤနှစ်ပေါင်းခံစားခဲ့ရသည်ဤ ??? ??? OMG, ဒါအရမ်းကိုလွယ်ကူတယ်။ ဘဝဟာငါ့အတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခုငါလည်းလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းအပြင်ကိုထွက်သွားနိုင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီသွားပြီးလူတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ငါ့ဘဝကိုတကယ်ပျက်စီးစေသလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်နှစ်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားမိသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံမှားသံသယမရှိပါ။ တစ်နေ့လုံးပြုံးနေတယ်
WTF MAN !!! ငါဘယ်တော့မှ fap သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာကအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါ asperger syndrome ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှသဘောမတူခဲ့ဘူး၊ ငါနဲ့အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမယုံချင်ကြဘူး။ Pff, ငါဒီယောက်ျားတွေအဘို့အဘယ်သူမျှမစကားလုံးများကိုရှိသည်။ fapping သည် cortisol နှင့် dopamine level များနှင့်ရှုပ်ထွေးနေပြီးအချိန်တိုလေးအတွင်း ဦး နှောက်ထဲကို dopamine အမြောက်အများလွှတ်ပေးသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ Low cortisol ကဘာကြောင့်ငါမနက်ခင်းမှာထနိုင်ခဲ့တာလဲ၊ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကအလွန်ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရွေ့လျားမှုနည်းသွားနိုင်သည်။ ငါ dopamine နိမ့်ကျတယ်ထင်တယ်၊ တခါတလေကိုယ့်ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော့်ကိုယ်ခန်ဓာကိုလှုပ်ရှားလို့မရဘူး။
wow MAN တော့ wow ့နေဆဲဒီယုံကြည်အတွက်မရှိမဖြစ်။ တောင်မှငါ့ဆံပင်တော့ဘူးထူ, im ဖြူဖပ်ဖြူရောမဟုတျပါဘူး, ငါသည်ငါ့မျက်စိအောက်မှာအိတ်များ dont ။ အဘယ်ကြောင့်ဆရာဝန်များကဤအကြောင်းကိုမသိကြသလော ဒါမှမဟုတ်သူတို့သိကြပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းစောင့်ရှောက်မှု dont သလဲ? သင်ကစဉ်းစားလျှင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကို၎င်း၏တော်တော်ယုတ္တိ။
ကိုယ့်ကိုငါ့ ocd ရုံနီးပါးလုလင်ပျို, ကုန်ကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ့်တစ်ဦးဖန်စီခေါင်းစဉ်ကိုရေးနှင့်ကဈမဆိုအမှားများကိုဖန်ဆင်းလျှင်ကြည့်ဖို့အဆ 10 ဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ရှောက်မှု dont, ငါ့ appartment တစ်ရှုပ်ထွေး ATM ဖြစ်ပါသည်, တော့ဘူးဂရုမစိုက် dont .. im မှာရှာဖွေနေ့ပင်ကနေတစ်ဦးခေါင်းကိုက်ရ dont ။ WOWOWOOWOWOWWOWOW သင်တို့ရှိသမျှကိုချစ်။ FAP4ဘဝကို NO ။
10 မှာ 27 / 2014 / 12: 42 နံနက်
အသက် ၂၁ - မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုရှိသည့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ: အပြန်အလှန်ပြောဆိုရန်လွယ်ကူသည်
ငါ nofap အပေါ်နေစဉ်သတိပြုမိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ပိုကောင်းတဲ့အမြင်နှင့်အကြားအာရုံ။ ဤသူသည်ငါပြောနိုင်အားလုံးဂီတပိုကောင်းအသံကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ရှင်းပြဖို့ခက်ခဲတဲ့တဦးတည်းဖြစ်၏ ကျွန်မပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရင်ကထက်သီချင်းစာသားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ ငါသည်လည်းပိုကောင်း (ယေဘုယျမိန့်ခွန်း၏မြင့်နှင့်စိတ်ဓာတ်) အသံသေံစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ ငါပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်, ပင်ငါ၏အရံရူပါရုံကိုအလွန်ချွန်ထက်ဖြစ်လာသည်။ ငါသည်လည်းပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံသေံစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။
သန့်စင်သော Palette ။ ငါပိုကောင်းတဲ့အစားအစာကိုမြည်းကြည့်နိုင်သည်၊ အရာအားလုံးကအပို "ကန်" ပုံရသည်။ BBQ ငံပြာရည်နှင့်အတူကြက်ဥအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့အအရိုးရှင်းဆုံးအစားအစာများပင်လျှင်အလွန်အရသာရှိပါသည်။ သစ်သီးများသည်ချိုမြိန်စေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနှင့်အတူ expression ။ ငါတောင်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, ငါ့ကိုယ်ငါ nofap မတိုင်မီရန်အသုံးပြုသည်ထက်အများကြီးပိုမပြောတတ်။ ပြည်သူ့အဲဒါကိုလက်ခံဖြစ်ဟန်, သူတို့ကပျော်မွေ့။ ငါကအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူယခုခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနားလည်ရန်ကိုရှာတှေ့; အချိန်တိုင်းငါလူတွေကိုသူတို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြဘယ်လောက်မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
ကြည့်ရှုသည်။ ငါကလူအများစုဆီက "အသွင်အပြင်" တွေအများကြီးရတယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ မိန်းကလေးတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ နီးစပ်သော“ သူသည်မည်သူဖြစ်သနည်း” ကြည့်ရှုခြင်းမျိုး ကျွန်မအမြင့် ၆'၀ ပေါင် ၁၅၀ ရှိပါပြီ။
ပိုကောင်းတဲ့ပြောဆိုမှုများ။ ငါကလူနဲ့စကားလက်ဆုံသယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောရှာဖွေနိုင်ရန် တစ်ဦး 10 / 10 မိန်းကလေး, ငါ့ကိုထက်ပိုမိုစိုးရွံ့သောသူယောက်ျားတစ်ယောက်, အဟောင်း dude, ဆိတျ, ငါ့နှမများ, မိဘများ, မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ။ ဒါက testosterone ဟော်မုန်းတိုးလာတာကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ပြောနေတာကိုငါသတိထားမိတယ်၊
ငါပြုံးနဲ့လူပတ်ပတ်လည်အများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အတူရယ်မော; စစ်မှန်သော, un-force အပြုံးများနှင့်ပြုံးရယ်၏ကြင်နာ။ ငါသူ / သူမထညျ့ရှာတွေ့သောကြောင့်, ငါပြုံး, ငါတစ်ခုခုအမှန်တကယ်ရယ်စရာသည်ထင်လျှင်ငါချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာရယ်ထွက်ပေးပါ။
အများပြည်သူအပြန်အလှန်လိုက်ရန်လှုံ့ဆော်မှု။ နေ့ခင်းဘက်ရောက်ရင်အိမ်မှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်လူရှေ့သူရှေ့ထွက်သွားမှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်ထွက်ရတာအဆင်ပြေသွားလို့ပါ။ ငါအများပြည်သူထွက်သွား loathed မီနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။
ပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်။ ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရှိသောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးအရာများကိုအာရုံစိုက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည်ဟောပြောခြင်း၊ မှတ်စုရေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝညှိထားသည်ဟုခံစားရသည်။ လိင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဤအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုမဝင်ပါ၊ သို့သော် nofap မတိုင်မှီတစ်ခါတစ်ရံမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
10 မှာ 30 / 2014 / 4: 12 နံနက်
အသက် ၂၀ - စိတ်ကျရောဂါ၊ OCD၊ ADHD ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း
အသက် ၂၀ - စိတ်ကျရောဂါ၊ OCD၊ ADHD ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း။ ရပ်လိုက် Meds ။ စိုက်ထူပြန်ရောက်လာတယ်။
ငါရိုးသားစွာငါ၏အတပြင်လုံးကိုအသက်တာ၌အခက်ခဲဆုံး2တစ်လတစ်ဦးရှိခဲ့ပေမယ့်အဲဒါကိုအလွန်တန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ။ စိတ်ကျရောဂါများနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေ၏အဓိပ္ပာယ်သှားခဲ့သညျ။ နှစ်ခုလအကြာတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကြှနျုပျသစိုက်ထူပြန်ရတယ်။ ငါလူမှုရေးလူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါက willpower အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲခံစားရသည်။ ငါဘုရားကျောင်းသွားစတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မမိတ်ဆွေကောင်းတွေအများကြီးရတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့အဆိုပါ OCD နှင့် ADHD သွားခဲ့ကြသည်ငါစိတ်ပညာရှင်သွားနှင့်ဤရောဂါများအတွက်ဆေးဝါးများယူပြီးတော့ဘူး။
11 မှာ 04 / 2014 / 4: 30 ညနေ
ဦး နှောက်မြူတွေကတော့တကယ်ကိုစိတ္တဇဆန်တယ်။ ဒါကြောင့်ကွယ်သွားပြီဆိုရင်သင်ကသာခွဲခြားသိနိုင်တယ်။ ငါထင်တာကတော့ဒီဟာကနေအကောင်းဆုံးအရာကတော့ယေဘုယျဘဝဟာပျော်စရာပဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နေ့အချိန်၌ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းပါကကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော်ရွှင်နေခြင်းကြောင့်သင့်အားအပြုသဘောဆောင်သောအဖြေပေးနိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကအားကြီးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားသူများ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မစဉ်းစားတော့ပါ။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ကဏ္ aspect တိုင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။